IWatermark + ye-Android- Iifoto zeWatermark kunye nevidiyo # 1 App | Iplum iyamangalisa
iWatermark + ye-Android - Imifanekiso yeWatermark kunye nevidiyo # 1 App
Asanda: 10 / 19 / 20
IWatermark + ye-Android -Iifoto zeWatermark kunye nevidiyo
Ukuba uyisiqalo okanye umzobi wezobuchwephesha, ifotojournalist okanye umculi iWatermark + (uhlaziyo kwi-iWatermark) ukusebenzela ukongeza isicatshulwa esibonakalayo okanye i-watermark ebonakalayo. Nje ukuba kufakwe kwifoto okanye ividiyo le watermark ebonakalayo ibonisa indalo kunye nobunini bakho. Kufana nokusayina impahla yakho yengqondo. I-iWatermark + nayo ineewatchark ezingabonakaliyo zokukhusela ifoto okanye ividiyo. Ukubona ukuba zeziphi ezinye izinto ezilungileyo ocinga ukuphuma kuzo (ngaphaya kwama-360) uphononongo lwenkwenkwezi kwi-Google Play Ivenkile.
Inani le-5 kwiiNkqubo ezili-100 eziPhambili zika-2014. - BestAppSite.com
"Enye into esiza kuyicebisa kwaye umlobi wekhasi lethu uKevin Kuster ucebisa ukuba yiWatermark" - UJoanne Cater, theappwhisper.com
"Ukuba ufuna ukukhusela ngokukhawuleza imifanekiso kunye neevidiyo zakho ekukopaneni, i-iWatermark iya kuba sisixhobo sakho ekufuneka ube nayo!" Uphononongo nge freeappsforme 3/12/22
Indawo yokuhlala: ✔ IsiNgesi ✔ isiFrentshi, ✔ isiJamani, ✔ isiJapan, ✔ isiTshayina, ✔ isiVietnam, ✔ isiHindi, ✔ iSpanish ✔ IsiUrdu ✔ Isi-Indonesian
Uncedo / Incwadi yezikhokelo
IWatermark + ye-Android- # 1 usetyenziso kwiiWatermark kwiifoto kunye nevidiyo
Iimpawu zamanzi ezifihlakeleyo ezikhusela iifoto zakho
Iintlobo ezininzi zeWatermark kunayo nayiphi na enye iApp
Kule minyaka ingama-2 idlulileyo iWatermark yeyona nto isixhobo seqonga esikhoyo saziwayo IMac kunye neWindows njengeWatermark Pro kunye ne-iOS / Ifowuni / i-iPad kunye ne-Android njengeeWapermark kunye neWatermark +. I-iWatermark ikuvumela ukuba ungeze ii-watermark zakho okanye ezeshishini kuyo nayiphi na ifoto okanye ividiyo. Nje ukuba le watermark ibonise indalo yakho kunye nobunini bale foto okanye ubugcisa.
Yintoni iWatermark? IWatermark yisoftware evumela uhlobo olutsha lokujonga. Isebenzisa iintlobo ezibonakalayo kunye nokungabonakali kwedijithali yokudibanisa ifoto kunye nomdali wayo.
Ngubani iWatermark? Wonke umntu othatha iifoto kunye nevidiyo. Siye saxelelwa ukuba kubalulekile kubantu abathanda iifoto, abafoti, kunye nabantu abasebenzisa i-Instagram, i-Facebook kunye nezinye iisayithi zemidiya yoluntu.
Kutheni ibalulekile? Kuba ivumela iifoto ukukhuthaza iifoto zabo kwi-max ngelixa kuthintela ukulahleka kolawulo kunye nokuqhagamshela njengombhali wezithombe. Ngoku xa ifoto kwabelwane ngayo umbhali / umzobi-zithombe unokuqhubeka waziwe kwaye anikwe amanqaku.
Kwividiyo engezantsi yiva uTerry White, iNqununu yeHlabathi yoYilo kunye noMvangeli woFoto kwiiNkqubo zeAdobe, thetha ngendlela ayisebenzisa ngayo iWatermark + eneLightroom.
I-iWatermark ikhethekile ngeendlela ezininzi:
Iyafumaneka kuwo onke amaqonga ama-4 i-iOS, iMac, Windows kunye ne-Android.
Both Yinto zombini eyokusebenza rhoqo kunye nolwandiso lokuhlela iifoto ezinokujonga ngokuthe ngqo kwiifoto zika-Apple kunye nolunye usetyenziso.
Sebenzisa enye okanye multiple iiwatchark Nga xeshanye kwifoto okanye iifoto.
Ermark Iw watermark iividiyo ngayo nayiphi na kwizinto ezisi-7 ezibonakalayo nezili-1 ezingabonakaliyo.
Ermark Iw watermark iifoto ngayo nayiphi na kwizinto ezisi-9 ezibonakalayo nezili-2 ezingabonakaliyo.
I-Watermark 1 okanye iifoto ezininzi kwibhetshi.
Uhlengahlengiso olusebenzayo lokunxibelelana kweziphumo ezinje ngethint, isithunzi, ifonti, ubungakanani, ukukhanya, ukujikeleza, njl.
Umboniso wokuqala wee-watermark (s) kwifoto ngaphambi kokuqhutywa.
✓ I-242 isiko kunye neefonti ezingama-50 ze-Apple = Iifonti ezingama-292 ezinkulu ezakhiwe ngaphakathi kwaye zilungele ukusetyenziswa kwiitermark zombhalo.
✓ Ngaphezulu kwe-5000 yemifanekiso yevayirasi yobungcali ingakumbi kubafoto.
Gcina zonke ii-watermark ezenziwe ukuvula / ukucima, ukusebenzisa kwakhona, ukuthumela ngaphandle kunye nokwabelana.
Iindidi ezili-11 zee-watermark. I-watermark ezi-6 zahlukile kwaye zizodwa kwiWatermark (jonga ngezantsi).
Sithathela ingqalelo yonke into oyenzayo ukuguqula ifoto, ukuyenza eyakho, ii-watermark. Kwii-watermark zangaphambili kwaqulunqwa kwaye kwasetyenziselwa izinto ze-ID ezinjengezitampu, imali, ii-banknotes, iipasipoti kunye namanye amaxwebhu asemthethweni. Kule mihla, ngendlela efanayo, ii-watermark zisa isazisi kunye nesitayile kwiifoto zakho kunye neevidiyo. Umfoti Ansel Adams wayenendlela eyahlukileyo ephawula iifoto zakhe, njengohlobo olukhethekileyo lokupeyinta Imaliphawula ukupeyinta kwakhe. UAnsel Adams wasebenzisa ubumnyama nobumhlophe, ukucaca, umahluko, omkhulu, engacacanga, kunye nemimandla enobungangamsha njengommtyikitya wakhe nangona wawutyikitya nomsebenzi wakhe. Njengabafoto kunye nabaculi abaphambili ungawubeka isitayela umsebenzi wakho ukuze unganeli nje ukuba mhle kwaye uqapheleke kodwa uyanceda ukukhusela indalo yakho. Kungenxa yoko le nto sibona into nganye engezantsi kwanemethadatha, i-stegomark, ukuphinda ubungakanani kwakhona kunye neefilitha njengeelatermark kuba zinokufaka ifoto kwisitayile sakho.
I-iWatermark + Iindidi ezili-11 eziWodwa zeWatermark
Iifoto ezivela kwiikhamera azaziwa. Xa uthatha ifoto kwaye wabelana ngayo, abahlobo bakho bayabelana ngayo, emva koko nabahlobo babo, emva koko abantu abangabaziyo. Ngalo lonke ixesha inezinto ezingaphantsi nangaphantsi kwaye ekugqibeleni akukho nxibelelwano kuwe. Ukuya kwihlabathi liphela ifoto yakho 'ngumdali ongaziwayo'. Iifoto ezininzi ezintle ziye zaya kwintsholongwane (zaziwa ngokuxhaphakileyo) ezazisilela kwinto eyazi umniniyo. Oko kuthetha ukuba, ngaphandle kwayo nayiphi na indlela yokuba abanye banike umbulelo, umbulelo okanye intlawulo kumnini. Isisombululo kule ngxaki yiWatermark, injongo yayo kukufaka iifoto zakho kunye nesazisi sakho ngeendlela ezahlukeneyo, ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Itekhnoloji kwiWatermark kunye nezixhobo ze-watermark ezili-11 zikunceda ukuba utyikitye, wenze ubuqu, wenze isitayile, ukhusele kwaye ukhusele iifoto zakho.
iWatermark kumphezulu inokubonakala ngathi iyafana ne-graphic zokusebenza njengePhotoShop kodwa iWatermark ithatha i-angle eyahlukileyo. I-iWatermark yenzelwe ukuqhubekeka kwifoto enye okanye ezininzi ezinezixhobo ezahlukeneyo zokubuka, zonke zenzelwe injongo eyodwa, ukukhupha iifoto zakho kunye nesazisi sakho njengomfoto.
-Sayine ngokwedijithali iifoto zakho / umsebenzi wobugcisa kunye neWatermark ukuze ubange, ukhusele kwaye ugcine ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nodumo.
-Thintela ukungqubana kunye nentloko ebuhlungu kunye nababangi abathi abayazi ukuba uyidalile.
-Thintela ukuxabana okubiza imali eninzi okunokubandakanyeka kwezi meko zokusetyenziswa gwenxa kwe-ip.
-Thintela ukuxabana kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Sebenzisa i-iWatermark kunye neendidi ezili-11 ezahlukeneyo zamachiza anokunceda ukukhusela imifanekiso kunye nokufumana iifoto kwikhredithi efanelekileyo.
iWatermark + # 1 usetyenziso lweTikTok
iWatermark + #1 usetyenziso lwe-SnapChat
iWatermark + #1 usetyenziso lwe-Instagram
Apha ngezantsi ezantsi ngasekhohlo yi-watermark ye-emboss kwifoto yomhlaba we-park ephakathi, i-NYC, ekwindla. Ibonisiwe kwiphepha le-canvas leWatermark +
[zilungisiwe]. Ukuhlaziywa kolwimi.
[yongezwe]. Inkxaso ye-Android OS 11.
[yongezwe]: Utyikityo lwew watermark longeziwe kwaye luthathe kwaye lidwebe amanqaku okusayina.
[yongezwe]: Umbala wephalethi omtsha ongezwe nge-HSL, uhlobo lwe-RGB yombala wohlobo, hlela umbala, umbala owuthandayo, imibala ebonakalayo ekhishwe kumfanekiso okhethiweyo.
[wongeze]: Ukuguqulelwa kolwimi lwaseVietnam.
[ihlaziyiwe]: UI yecandelo loncedo elihlaziyiweyo kwaye longeze iTekhnoloji entsha yekhonkco. Inkxaso.
[ihlaziyiwe]: ukusebenza kweapp.
[ihlaziyiwe]: Ulwazi lwenguqulo yeapp. [updated]
[echanekileyo]: Ama-albhamu alahlekileyo kwigalari
[ihlaziyiwe]: Uyilo lweGalari yeendaba. [ihlaziyiwe]
[ongeze] ongezelelweyo isiphumo esibonakalayo kwisicatshulwa sewermark [esongezwa]
[ongeze] ongezelelweyo ugcine kwikhadi le-sd ukhetho kwizinto ozikhethayo. Isilumkiso ukuba indawo ekhuselekileyo yokugcina imithombo yeendaba isithuba esingaphantsi kwe-1GB [yongezwa]
[indawo emiselweyo] yasimahla iya kuboniswa ezantsi ngasekhohlo kwevidiyo [ngokusisigxina]
[ehlaziyiweyo] ungeniso lweelebheli zevidiyo / yevidiyo ehlaziyiweyo kunye nemiyalezo yokuthumela ngaphandle [ehlaziyiweyo]
[ongeze] ukuhambisa iiwatchark kuLuhlu lweWitermark ukucwangcisa ngendlela ofuna ngayo [ongeze]
[indawo emiselweyo] yewatchark kwindawo ye-canvas / ukujonga kwangaphambili kwakwahlukile kunombonisi wewallark [ehleliwe]
[entsha] Ngoku yongeza ezakho iiFonti!
[entsha] I-HEIC kunye ne-HEIF ngoku ziyaxhaswa kwi-Android 9 + apho inokubonwa kwigalari kwaye ibonwe iwatermark.
[mod] Wongeze iikhowudi zokufaka iikhowudi zevidiyo
[mod] Inkxaso eyongeziweyo yemifanekiso elahlekileyo kwii-albhamu.
[mod] Yongezwe inkxaso kwiividiyo ezilahlekileyo kwiiAlbum.
[Entsha] Zonke iifayile zobuso befonti zezolusapho ngoku zidityaniswe kusapho lwefonti
[entsha] Ukongezwa kweBold kunye ne-Italic yeefonti kunye nosapho kwiintsapho.
[ongeze]: Hlela imifanekiso kunye neevidiyo ngokomhla kunye nenqaku legama. yongezwa
[elungiselelwe]: Umcimbi wokufaka iikhowudi yevidiyo. ilungisiwe
[ilungiselelwe]: Imifanekiso ilayisha ixesha. ilungisiwe
[elungiselelwe]: i-icon iyancipha kunqakrazo. ilungisiwe
[ilungiselelwe]: ii-ext kunye neekhowudi zekhowudi yeQR. ilungisiwe
[yongezwa]: 1080p okanye 4k inkxaso yevidiyo. yongezwa
[ongeze]: Inkxaso yesiseko sokwakha ezingama-64. yongezwa
[uhlaziyiwe]: Isihloko sohlobo ngalunye lwewashi. ihlaziyiwe
[yongezwa]: Inkxaso ye-10 ye-Android. yongezwa
[ilungisiwe]: Ukufikelela kumfanekiso wegalari ye-10. ilungisiwe
-i [esisigxina]: IBatch yemicimbi yokulungisa iifoto. Ngoku ilungisiwe.
-Kwenziwe [kulungiswe]: Umba wokutshintsha kolwimi. Ngoku ilungisiwe.
-Kwenziwe: Ngoku lisuse eli nqaku.
-Kwenziwe: Ngoku ilungisiwe.
- [entsha]: ihlaziyiwe ukuze ixhase i-Android 9.0
-Kwenziwe [kulungisiwe]: umsebenzisi uxele-i-App yengozi kwi-Samsung Qaphela 9
- [entsha]: ifonti yencoko
-[entsha]: Imizobo ephuculweyo kunye nokusonjululwa kwe icon
- [entsha]: "Icandelo lokuDalwa kweeFoto" yongezwa kuluhlu lweethegi. Ukwenziwa kwemifanekiso kubandakanya, unyaka, omfutshane kunye nokude wenyanga, emfutshane kunye nomhla omde wenyanga. Iiyure ezingama-24 zomhla wexesha lefomathi ongezelelweyo. Enkosi kumsebenzisi uPeter
-Ingaqwalaselwa]: tint- yokupeyinta i-watermark encinci njengesiginitsha
- [entsha]: misc. ukuphuculwa nokulungiswa
- [entsha] i-App Localization-Ukuxhasa amazwe ahlukeneyo iilwimi:
-Urdu (Pakistan), Hindi (India), Indonesia (Indonesia), IsiTshayina sesiTshayina (iTaiwan, iHong Kong, neMacau), isiJapan (Japan), IsiDatshi (isiJamani), iSpanish (iSpain) kunye nesiFrentshi (France)
-Imibhalo esisiseko yeWitermark Imiselwe
-Imihla yokubhalwa kwesicatshulwa Banner Watermark Imiselwe
-[entsha] Umbhalo wesibhengezo Watermark
* IsiNgesi lulwimi olusilelayo lokusebenza. IsiTshayina esenziwe lula (iChina) ezayo ngokulandelayo.
Enkosi ngayo yonke ingxelo. Nceda ugcine iseza.
-Ezisunguliwe Silungisiwe. Enkosi kuTanya owabhalayo kwaye usixelele kakuhle usazisa ngento yethu (igama lethu elingelolakhe). Enkosi kakhulu kwabanye abathumele i-imeyile ngeempelaveki. Uxolo kubo bonke abantu njengoko besimangalisiwe yile nto. Ngenxa yokuba iWatermark + kunye neWatermark + yasimahla zisebenzisa ikhowudi efanayo, ukutshintsha komzuzu omnye kubangele olo phazamiso. Ngoku uLungiselelwe!
-Urdu (Pakistan), Hindi (India), Indonesia (Indonesia), China (China), Japan (Japan), Dutch (Germany), Spanish (Spain) and French (France)
-[[modified] Utshintsho lweWitermark yoHlelo
* IsiNgesi lulwimi olusilelayo lokusebenza.
-[Abasebenzisi] abatsha banokwabelana ngemifanekiso ebonisiweyo / iifoto kwi-WhatsApp.
- [entsha] Ukulandelelana kwefoto, Tshintshela kwiPhoto yangaphambili (s)
- [modified] Imicimbi yokuLandelwa kweFoto isonjululwe, Ukulungiswa kwe-UI
-[[modified] Ukuphuculwa kwe-ArcText Watermark.
- [Imiselwe] Imiba yesikhundla seGrafikhi, Umbhalo kunye neArcText Watermark
-Imihla ye-ArcText Watermark Imicimbi eLungisiweyo.
-[[esisisigxina] Uncedo / Inkxaso yomthengi yokuDibanisa ukuLungiswa ilungisiwe.
-Basebenzisi abasisigxina banokwabelana ngemifanekiso ebonisiweyo / iifoto kwiMeko ye-Facebook / kwiXesha labo.
-[[ehleliwe] ArcText Watermark ubungakanani, imida- [emiselweyo] QRCode Watermark UI kunye nokujikeleza kulungisiwe
-Imihla ngemihla egqityiweyo yeWatermark
-[[modified] Olunye uhlengahlengiso lwe-UI
-[[modified] Hudula, usondeze kwaye ujikeleze i-Watermark ngokuyichwetheza nakweyiphi na indawo esikrinini.
Umbulelo omkhulu kubasebenzisi abathumele i-imeyile kunye neengcebiso kunye neebugs. Iminikelo yakho incediwe!
-[entsha] Watermark Hudula, Ukusondeza kunye nokujikeleza kuphuculwe
-Izinto ezisetyenzisiweyo zilandelelana
-Umcimbi oLushenxisa iFoto ulungisiwe
-Indawo esetyenzisiweyo yeWitermark (s) ihleliwe
-Imihla ngemihla eguquliweyo yoLwaziso lwamanzi e-Watermark
- [esisisigxina] Iitermark Watermark (s) Ukungaphumeleli kumbandela osuswe umda
-Ukuphuculwa kwe-UI kuphuculwe
-[[modified] Icandelo lokunceda liphuculwe
- [entsha] Watermark Hudula, Sondeza kwaye Jikeleza njenge-iOS
-[[entsha] Yongeza iReame Watermark
- [entsha] yongeza inombolo yenguqulo malunga nephepha kunye namakhonkco
-Umfanekiso [osisigxina] okhethiweyo (ungeniswe) kwigalari / ethathwe kwikhamera wanyamalala ngamanye amaxesha
-[[modified] amaqhosha aphuculweyo
-[modified] malunga nengxoxo ziphuculwe
-I-Emboss, Iziphumo ze-engrave zeentlobo ze watermark zombhalo kunye neentlobo ze-ArcText watermark.
-Tshixa, uphindwe kabini, kwaye ucime nayiphi na i-watermark (s) ekunene kwi-Watermark Manger.
Jonga incwadana yemigaqo ngeenkcukacha zendlela ezisebenza ngayo.
-Imiyalezo ephosakeleyo yemposiso
-Ukugcina okuphuculweyo kwemifanekiso ebonisiweyo / ividiyo kwiifolda.
-Ukulungiswa kokutshekishwa kokuqinisekiswa kwe-Twitter, Facebook, Instagram
-Ulunye uphuculo oluninzi kwi-ui kunye nezinto ze-misc.
-Udibaniso lukaGoogle, ngoku umsebenzisi angenisa ifoto ngqo kwiGoogle Drayivu kwiWatermark + ukuya ngqo kwimifanekiso ye watermark.
-Uhlobo lwe-watermark yokubhaliweyo kunye ne-ArcText watermark, iifonti ezikhethiweyo zangaphambili ziya kuboniswa zikhethwe xa umsebenzisi evula incoko yababini yexesha elizayo
-Ngenisa iifoto ezizodwa okanye ezininzi ukusuka kwiDropbox. Sebenzisa isitshixo se-hardware / OS sokubuyela ngasemva kwindawo yolawulo.
-Ukuzinza okukhulu kwimeko yeememori eziphantsi.
-Iimpawu ezininzi zamachaphaza ngoku zinokufakwa nakweyiphi na ividiyo njengoko ubuya kuyenza kwiifoto.
Ndiyabulela kubo bonke abasebenzisi ngengxelo enkulu, iingxelo ze-bug kunye neengcebiso. Impendulo yakho (ngqo ngqo kuthi kunye noqwalaselo (kwiGoogle Play) zizinto ezinceda inkqubo phambili. Izimvo zakho kunye nenkxaso ziyasinceda zisinike umkhombandlela. Ininzi ezayo ...
-Umagnifier womfanekiso ubonakala kwitephu ende kumfanekiso obonisa indawo ekhulisiweyo phantsi komnwe
I-watermark ngoku ijongiwe ekuthepheni naphina kwinto ekuluhlu lwe-watermark endaweni yokupeyinta uphawu lomqondiso
-Ifoto inokwabiwa kule app ukusuka kwi-Photoshop Express app
Into ebonwa ngumbonisi wevidiyo uyongezwa. Yay! Ngoku, iWatermark + ii-watermark zisathe kwaye iifayile zevidiyo.
1- Imo yokubonakalayo komhlaba ngoku ixhaswa. Guqula phakathi kwePortrait kunye neLowwwwwwwwwesiemo sokuma komhlaba naphi na kwi-app.
2- Ububi. ukuphuculwa kokujongana nomsebenzisi, ukulungiswa kweefowuni ezithile
3 -I-Insert efakiweyo yomhla ifomatiwe ngokobubanzi bendawo esekwe ngumsebenzisi kwisixhobo sayo yonke imisebenzi yendalo ye-watermark equkethe i-Insert Tag ukhetho
Enkosi abasebenzisi ngengxelo entle! Nceda ugcine iseza. Nceda uxelele abahlobo bakho malunga neapp. Abantu abaninzi bayanceda iWatermark + ivele
Ukuza emva kothusayo :)
1- Imo ye-Landscape ixhaswa kwaye ngoku umsebenzisi unokutshintsha phakathi kweParrait kunye ne-Landscape mode nakwesiphi na isikrini kwi-app.
I-2- I-tag efakiweyo yomhla ifomathelwa ngokomgaqo osekwe ngumsebenzisi kwisixhobo sayo yonke imisebenzi yendalo ye-watermark equkethe ukhetho lokufaka kwi-Tag.
3- Ukuphuculwa kozinzo lweapp.
- Umsebenzi omtsha. Ukusebenza kweTag Tag kubonelelwe oMbhalo weWitermark, iArcText Watermark, i-QRCode Watermark, iMetadata Watermark kunye neendidi zeStegoMark Watermark. Oku kuthetha ukuba kwisicatshulwa seentlobo zewatermark ezingasentla ungabeka 'ithegi' emele ulwazi olubekwe kwifoto ngekhamera efana, isantya sokuvala, igama lekhamera, iGPS, isixhobo esiphantsi komhlaba, ixesha, kunye nenqwaba yabanye. Le tag ifana nokwahluka kolo lwazi luthi emva koko lubonakale kwifoto ebonwa. Yizame!
-Umsebenzi wobugcisa ophuculweyo.
-Indlela ethembekileyo yomfanekiso ogciniweyo ubonisiwe
I-angle yeewermark zeentlobo ezahlukeneyo zinokulungiswa ngokubonelela ngexabiso le-angle kwibhokisi yokubhaliweyo ukongeza kwisilayida.
-Kwazo zonke izilayidi kuzo zonke iindidi ze watermark ezibonakalayo, ukujonga kwangaphambili kwe-watermark kubonisiwe ngokupeyinta nje isilayidi.
-Ibug iyasuswa apho i-watermark yeteksti yomlinganiswa omnye yayisencamathela ngokuthe nkqo.
-Iqhosha elithambileyo liyisitha ngokuzenzekelayo ekucofeni Kwenziwe kuMbhalo kunye ne-Arc Umbhalo watermark
-Izinye iibhugi ziyasuswa
-Ukuzinza kwesicelo kuyaphuculwa
Inkxaso ephuculweyo yokujonga imifanekiso emikhulu.
-Ukucofa kwi-watermark kuluhlu lweempawu ngoku kuvula ii-watermark zoluhlu ngokukhawuleza kunokubonisa isikrini.
-Uphelise isithintelo sokuvula uluhlu lwe-watermark screen kuqala ngaphambi kokuvula isikrini ukuhlela i-watermark ngokuthepha kabini kwi-watermark kwisikrini esikhulu.
Rave, uPhononongo kunye noKhuphelo lweeWatermark + ze-Android
I-iWatermark + yeyona ndlela ibalaseleyo yokujonga izinto endakha ndayibona ukuza kuthi ga ngoku kwi-iOS. Ihlanganiswe ngokufanelekileyo njengesongezo sokuhlelwa kwesithombe se-iOS. " kunye ne "Inani le-5 leZicelo eziPhezulu ezi-100 zonyaka." - UTerry Omhlophe, INqununu yoYilo lweHlabathi liphela kunye noMvangeli woFoto kwi-Adobe Systems, Inc.
“IWatermark + yeyona app watermark inamandla ekhoyo. Ivumela abasebenzisi ukuba bongeze ukuya kuthi ga kwiindidi ezisixhenxe zewatermark kwiifoto zabo, benze ngokwezifiso, emva koko babelane kumaqonga eendaba ezentlalo. ” Indawo yaseVietnam Taimienphi.vn uphononongo lweWatermark + 10/14/20
Isifundo sikaThabitha Carro
Uphononongo lweArabhu lweWatermark +
I-30 sec Intro kwi-iWatermark + ye-Android
Iivenkile zokuHlala kwiGoogle Play
Yithande ilula kwaye ipholile
Alpha ModSquad Jan 6, 2019 kwi-2: 18 AM
thanda le app
UAndre Rüberg uJan 1, 2019 kwi-8: 49 AM
Kuqala ndivavanye uhlobo lwasimahla… kwaye ndonwabile. Ndiye ndathenga uhlobo-lwefoto (ngexabiso eliphantsi)… kwaye ndachaphazeleka… ndiyibuyisile imali yam ndaza ndathenga olu hlobo ... lweevidiyo. Oku kukugqibela endikuvavanyileyo ekuqaleni. Kutheni kubalulekile ukuthenga le nguqulo? Unokwenza ii-watermark ezingabonakaliyo… !!! ezingonakalisi iifoto zakho.
UNicole DeRosa, Agasti 14, 2020, 03:53
Ungaze ube ngumcimbi- usetyenziso oluthembekileyo olusoloko lusebenza ngendlela endilufuna ngayo. Ngokuqinisekileyo ndincoma!
UDewi Maharini, ngoJulayi 3, 2020, 03:15
hlala uyithanda. enkosi ngempendulo yakho ekhawulezileyo. le ndiyifunayo. sele uyisebenzisile ukusukela ngo-2017, usayithanda
IWatermark + 3.5 ye-Android-Khusela iifoto zakho ezixabisekileyo zeVidiyo kunye neeVidiyo
UKUKHUTSHWA NGOKUPHELELEYO: UMHLA: 9/25/17 ISISHWANKATHELO ISan Francisco, CA - iWatermark, yiyo Nombolo 1 kwaye sisixhobo sokubukela kuphela esikhoyo kuwo onke amaqonga ama-4, i-iPhone / i-iPad,
Septemba 24, 2017	akukho Izimvo
iWatermark + ye-Android Ekhutshiweyo. Khusela iifoto zakho kunye nevidiyo.
UKUKHUTSHWA NGOKUPHELELEYO: UMHLA: 7/25/17 ISISHWANKATHELO IPrinceville, HI - Plum Amazing, LLC. -IWatermark + ye-Android Ikhutshwe. Khusela iifoto kunye neevidiyo zakho ngeWatermark + Q:
Julayi 24, 2017	akukho Izimvo
Inkqubo yokufota yoNyaka, iWatermark +. Ngoku iyafumaneka kwi-Android-Khusela kwaye ukhusele iiFoto zakho zeMithombo yeendaba
UKUKHANGELWA NGOKUPHELELEYO: Ungabhalisi uHlaziyo lweDilesi ye-imeyile Jonga kwi-Intanethi Yabelana ngeTwitter Yabelana ngeFacebook UMHLA: Nge-16 kaNovemba ngo-2015 ISISHWANKATHELO iPrinceville, HI - Plum Amazing, LLC. Isakhono seWatermark
Novemba 16, 2015	akukho Izimvo
iWatermark + Uncedo
- ukuthumela ngaphandle / ukuthumela ngaphandle kwaye ilungisiwe. inguqulelo entsha 6.7.9 iya kukhutshwa kungekudala.
1/10/22 ikhuphe inguqulo 6.7.8 inguqulelo entsha yazo zombini i-iWatermark kunye ne-iWatermark Lite. Inguqulelo yeLite isimahla ukukhuphela kwiApple kwaye ihlala isimahla. Oko kwenza iLite app ibe yeyona nto yokwabelana nabantu kuba banokuzama zonke iimpawu ngaphambi kokuthenga. Inokuthengwa kwe-in-app ukuze zonke iimpawu kunye nee-watermark zingathengwa zodwa okanye zonke ngaxeshanye ukonga imali. Zonke izinto ziyafumaneka kwaye zinokusetyenziswa kodwa encinci, 'Yenziwe nge-iWatermark' ibonakala kwifoto nganye de kuthengwe i-watermark yaza yasuswa. Okanye iphakheji yonke ithengiwe esusa 'Yenziwe nge-iWatermark' yazo zonke ii-watermark.
I-Lite inezipho kubasebenzisi. Izipho zi-Text watermark, ukukwazi ukwenza i-watermark iifoto nge-Text watermark kunye nokukwazi ukwenza i-watermark ngaphakathi kwe-app ye-Apple Photo. Umntu unokwenza i-watermark yombhalo kwaye ayifake kwifoto okanye asebenzise i-watermark yoMxholo ngaphakathi kwi-app yeeFoto ze-Apple kwaye ngenxa yokuba ezo zombini zizipho zasimahla ezikwi-app izinto 'Yenziwe nge-iWatermark' ayibonakali kwezo foto zifakwe emanzini. Ke, inguqulo yeLite yeyona ilungileyo yokwabelana nabantu kuba banokuvavanya yonke into simahla kwaye bathenge kanye le nto bayifunayo.
Kwinguqulo ye-Lite enefoto kunye nobuncinci i-watermark enye uya kuyibona emazantsi efoto "Yenziwe nge-iWatermark" cofa eso sibhengezo ukuze undwendwele iphepha leVenkile ye-App, apho kuthengiswa izinto ezili-18: iintlobo ezili-12 ze-watermark, ezi-3 "watermarking". izakhono” (ifoto, ividiyo kunye nokuhlelwa kwendawo), kunye ne-3 "inyanda" (i-2-for-1-like deals, kunye "Nokuphucula Zonke"). Ezinye zinexabiso kwi-zero, kwaye kungoko "zizipho" (njenge-TEXT watermark).
Xa ungena evenkileni, "into yokuthengisa" idanyazwe ngokufutshane ukubonisa ukuba ukuyithenga kuya kususa ibhena "Yenziwe nge-iWatermark" yelo nqaku ubuzama.
Ifonti entsha Caveat yongeza
Umsayino we-watermark ngoku unokuhlehlisa/uphinde wenze kwakhona
Inkxaso ye-Instagram ephuculweyo
Yenza i-iWatermark + ibe yindawo yokugqibela yokukhangela ngaphambi kokuba uyithumele ku-Instagram nakweminye imidiya.
Nokuba yifoto okanye ividiyo - kuhlala kububulumko ukuyijonga kuqala.
Kuhlelo 6.7 songeze into enye enkulu entsha. Ngoku ungathumela ngaphandle kwaye ungenise ii-watermark zakho. Eli linqaku elibaluleke ngokwenene njengoko likuvumela ngoku ukuba ugcine yonke indalo yakho ye-watermark exabisekileyo ochithe ixesha usenza. Kungcono ngoku unokwabelana ngeefayile zewatermark nabahlobo abakwasebenzisa i-iWatermark + okanye kwinkampani yakho njengewatermark esemthethweni. Ukuyisebenzisa, sicebisa ukuxhasa kwangoko, yiya ku 'Uluhlu lweWermarkapho uza kubona ii-icon ezimbini ezintsha.
Ibhokisi enotolo oluphezulu kwi-bar bar esezantsi ikuvumela ukuba uthumele ngaphandle / wabelane / ugcine ii-watermark zakho.
Ibhokisi enotolo olusezantsi kwi-bar bar esezantsi ikuvumela ukuba ungenise ii-watermark kwiifayile ze- .iw + ezazithunyelwe ngaphambili kwiWatermark. Unokwenza i-zip kwaye wabelane ngeefayile ze-.iw + nge-imeyile okanye nangona ufuna abantu okanye ngaphakathi kwenkampani.
Ulwazi oluthe kratya apha.
Umsebenzisi wokuqala? Vuka ngokukhawuleza ngokukhawuleza kunye nezifundo ezimnandi zeWatermark + zevidiyo.
Ukusetha imvume echanekileyo kulula kodwa kubalulekile, nceda ufunde oku.
Nceda ujonge incwadi yokuqala ukuphendula imibuzo. Kwiphepha ngalinye le app ngaba? emazantsi ngasekunene. Ngamnye? inekhonkco elahlukileyo kwaye iya kwahluka kwinxalenye yemanyuwali efanelekileyo kuloo nxalenye yeapp. Ungafunda incwadana apha kunye / okanye kwikhompyuter yakho. Yenza i-bookmark kwikhonkco kwikhompyuter yakho ukuba unombuzo ungonwabela incwadana yesikrini kwi-BIG. Ukwenza ikopi yeekhonkco zonxibelelwano kunye ne-imeyile kwikhonkco lakho okanye ulithayiphe:
Cofa apha ukuba ungene kwilog yeenguqu kuhlobo lwe-iOS.
Jonga iClock kunye neCopyPaste yeMac okanye iWatermark Pro yeMac okanye u-Win ngqo kwindawo yethu. Cofa oku ikhonkco liza kufumana isaphulelo esizenzekelayo sama-30% kwinqwelo yakho kuyo nayiphi na i-app kwisiza seplumazing.com.()
Xa usebenzisa i-Instagram okanye enye imidiya yoluntu, khumbula, ii-watermark ezicekeceke zihamba phambili. Sifuna ukunceda nonke nina bantu bayilayo ukuba umsebenzi wenu ubonwe. Landela iWatermark (@Twitter, @Facebook, @Instagram, @Pinterest, njl. njl. njl. kwaye ubeke umzobo wakho wobugcisa #iWatermark oza kufakwa!
Sifuna uyazi ukuba SIYAKUTHANDA ngokwenyani ukuphononongwa kwenkwenkwezi ezi-5, zingaphezulu kwewaka ngoku. Enkosi! Ngokungafaniyo nosetyenziso oluninzi sihlala sihlaziya iWatermark +. Khumbula ukuba siyathanda ukuva iingcebiso zakho.
Ukuba uthanda ukuphuculwa okuqhubekayo kwaye ufuna ukuqhubeka, nceda ungenise uphononongo lwevenkile ye-App kunye / okanye uvumele abahlobo bakho (ngakumbi abathwebuli beefoto) bazi malunga neapp. Ukukhankanywa ngokulula nguwe kuFacebook, Twitter, Instagram, Pinterest iwebhusayithi, njl. inokunceda umntu athathe isigqibo sokuyikhuphela, xa beyithenga isinceda ukuba siyiphucule. Enkosi enkulu!
NEWS Uluhlu lwee-100 zokusebenza eziphambili zonyaka iWatermark + yiNombolo 4. Nalu uphononongo / isifundo esikhulu iWatermark + tutorial nguLinda Sherman. Uhlaziyo ngakumbi kwiPinterest.
Ingxaki? Sithumelele i-imeyile. Uphengululo lwenkwenkwezi e-1 kwi-iTunes xa ungafumani sethingi ayenzi nto kuwe okanye kuthi. Ukuqhagamshelana nathi kwiphepha eliphambili kwi-app cofa? icon ngasekunene. Oko kukuthatha kwincwadana nakwiziko eliphezulu kwi-nav bar yi, 'Inkxaso yeTekhnoloji', ikhonkco lokucofa. Siyakuthanda ukuva kuwe ukuba unombuzo okanye ingxaki yile hayi ehlanganiswe yile ncwadana. Enkosi.
Ulawula ukuba usetyenziso lunokufikelela kulwazi lolwazi kwisixhobo sakho kwiimvume. Ngethuba lokuqala usebenzisa iincwadana zeWatermark + ziya kuvela zicela ukusebenza ngeentlobo ezi-3 zolwazi, iiFoto kunye neKhamera. Umzekelo ukuba awuyiniki imvume yokufikelela kwiifoto xa ingxoxo ivela kwaye awuyi kuba nakho ukuvula iifoto zakho.
Ukuthatha ifoto iWatermark + kufuneka ifikelele kwikhamera. Cofa nje 'Kulungile' kule. Oku kukuvumela ukuba uvule kwaye usebenzise ikhamera kwi-app.
Xa uqala ukuzama ukuvula ifoto okanye ividiyo uza kuyifumana kule ncoko yeApple yeMvume. Kungenxa yokuba iiWatermark + ii-watermark ezingatshatanga kunye neebhetshi zeefoto kufuneka 'Ukufikelela kuzo zonke iifoto' Kubalulekile ukuseta le mvume ngokuchanekileyo. Utolo lukhomba kukhetho.
KUBALULEKILE: Ukuba uyalile imvume okokuqala ukhetha iifoto, iifoto zokubukisa kunye nezinye izinto aziyi kusebenza. Ukulungisa kufuneka utshintshe imvume ngokuya kwiApple yokuCwangcisa iApple kwaye uchwetheze 'iWatermark +' apha ngasentla:
Emva koko chwetheza 'iWatermark +' ukufumana useto lweWatermark. Ewe, inqaku elitsha le-iOS 14!
Ukutshintsha useto lweWatermark, + vula usetyenziso lweSeto kwifowuni yakho skrolela ezantsi kwiWatermark +. Qiniseka ukuba iiFoto (ngezantsi) zinemvume emiselweyo Zonke iifoto'
Ukuthatha ifoto iWatermark + kufuneka ifikelele kulwazi lwendawo kwiifoto. Lowo usetwa 'ngelixa usebenzisa'. Oku kubalulekile kuba vumela ukubona idatha ye-GPS kwaye ususe olo lwazi kwiifoto ezinamanzi. Ikwavumela ukusetyenziswa kweempawu zethegi.
Nalu uluhlu lokudlala lweevidiyo zokufundisa ukunika umlenze kwiWatermark +. Kulula ukubukela kwitafile yelager okanye kwiMac okanye kwiWindows esweni. Uya kuzuza kakhulu ngokubukela zonke iividiyo ezimfutshane kakhulu. Lo mdlali uza kudlala uthotho lweevidiyo onokuzimisa nanini na. Iividiyo ezizodwa zikwacandelo labo elingezantsi. Chukumisa umphezulu ngasekhohlo komdlali ukuze ubone uluhlu lweetutorial. Babandakanya ukulandelwa, ukuba awungeva sifundo uqiniseke ukuba ivolumu yakho inyukile kwaye imowudi yokuthula ivuliwe.
Enkosi ngokukhuphela iWatermark + lelona lungu lisemtsha nelona lisapho liphezulu kusapho lweWatermark. iWatermark sesona sixhobo seqonga sithandwa kakhulu esikhoyo kwi I-iPhone / i-iPad & Android (Zombini iWatermark kunye neWatermark +) kunye nokunye IMac kunye neWindows njengeWatermark Pro. IWatermark ikuvumela ukuba ungeze ii-watermark zakho zobuqu okanye zeshishini kuyo nayiphi na ifoto okanye ividiyo. Nje ukuba wongeze le watermark ibonisa indalo kunye nobunini bale foto okanye umsebenzi wobugcisa.
Yintoni iWatermark? IWatermark sisoftware yokufota enobuchule evumela uhlobo olutsha lokujonga. Isebenzisa iintlobo zokubonakala ezibonakalayo kunye nezingabonakaliyo zedijithali (ezingafumanekiyo nakwezinye iapp) ukudibanisa ifoto nomdali wayo.
I-iWatermark ihlukile, ezi zinto azifumaneki nakweyiphi na i-Watermark App:
✓ Iyafumaneka kuwo onke amaqonga ama-4.
✓ Yongeza enye okanye multiple iiwatchark Nga xeshanye kwifoto, iifoto okanye ividiyo.
Iwermark iividiyo ngayo nayiphi na kwizinto ezisi-7 ezibonakalayo nezili-1 ezingabonakaliyo.
Iwermark iifoto ngayo nayiphi na kwizinto ezisi-10 ezibonakalayo nezili-2 ezingabonakaliyo.
✓ I-watermark eyi-1 okanye iifoto ezininzi ngaxeshanye.
Uhlengahlengiso olusebenzayo lwempembelelo ezinje ngetint, isithunzi, ifonti, ubungakanani, opacity, ukujikeleza, njl.
✓ Imboniselo ebukhoma ye-watermark (s) kwifoto (s) ngaphambi kokugqitywa.
Port Imizobo yebatch, imbonakalo yomhlaba, ukusonjululwa okwahlukileyo kunye nemilwelwe ibonakala kwindawo nganye nganye.
✓ Cwangcisa ukrolo oluhle kunye nefayile ekhethekileyo.
Iling Ukufakela iwatch kwindawo ethe tyaba kwiindawo ezininzi, ujikeleze kwaye ubekwe esikhumbuleni kwifoto yomoya.
✓ Gcina zonke iiwatchark ezenziweyo ukuvula / ukucima, ukuphinda usebenzise, ​​ukuthumela ngaphandle kunye nokwabelana.
Iindidi ezili-12 zee-watermark. I-watermark ezi-7 zahlukile kwaye zizodwa kwiWatermark (jonga ngezantsi).
Sithathela ingqalelo yonke into oyenzayo ukuguqula ifoto, ukuyenza eyakho, ii-watermark. Kwii-watermark zangaphambili kwaqulunqwa kwaye kwasetyenziselwa izinto ze-ID ezinjengezitampu, imali, ii-banknotes, iipasipoti kunye namanye amaxwebhu asemthethweni. Kule mihla, ngendlela efanayo, ii-watermark zisa isazisi kunye nesitayile kwiifoto zakho kunye neevidiyo. Umfoti Ansel Adams wayenendlela eyahlukileyo ephawula iifoto zakhe, njengohlobo olukhethekileyo lokupeyinta Imali phawula ukupeyinta kwakhe. UAnsel Adams wasebenzisa ubumnyama nobumhlophe, ukucaca, umahluko, omkhulu, engacacanga, kunye nemimandla enobungangamsha njengommtyikitya wakhe nangona wawutyikitya nomsebenzi wakhe. Njengabafoto kunye nabaculi abaphambili ungawubeka isitayela umsebenzi wakho ukuze unganeli nje ukuba mhle kwaye uqapheleke kodwa uyanceda ukukhusela indalo yakho. Kungenxa yoko le nto sibona into nganye engezantsi kwanemethadatha, i-stegomark, ukuphinda ubungakanani kwakhona kunye neefilitha njengeelatermark kuba zinokufaka ifoto kwisitayile sakho.
I-iWatermark + Iindidi ezili-12 eziWodwa zeWatermark
Apha ngezantsi kukho ividiyo echaza oku.
Ungangumnikazi we-iPhone kwaye ungazicingeli njengomfoti oqeqeshiweyo kodwa i-iPhone yikhamera enobuchule. Inokwenza izinto ezimangalisayo ngokukhanya, umbala kunye nemvakalo engenakwenzeka kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kukulungele, kuyakhawuleza, ukukhanya kwaye uhlala unawe. Ilungile ngokusondeleyo nakude, i-portraits kunye ne-landscapes. Nabani na kwezi ntsuku unako ukubamba ifoto okanye ividiyo eyahlukileyo kwaye xa kwabelwana ngayo inokuba yintsholongwane. Ifoto elungileyo ingazisa imali nodumo. Kodwa nokuba ayibalulekanga kuwe ayikukhathazi UKUZILUNGISELELA unokuba yindawo kwindawo elizayo apho isiganeko esithile sikaThixo, sendalo, umntu okanye irhamncwa senzeka kwaye kwenziwa imbali. Zilungiselele ukulufaka kubuntu bonke.
Iifoto ezivela kwiikhamera azaziwa. Xa uthatha ifoto kwaye wabelana ngayo, abahlobo bakho bayabelana ngayo, emva koko nabahlobo babo, emva koko abantu abangabaziyo. Ngalo lonke ixesha inezinto ezingaphantsi nangaphantsi kwaye ekugqibeleni akukho nxibelelwano kuwe. Ukuya kwihlabathi liphela ifoto yakho 'ngumdali ongaziwayo'. Kubuhlungu oko. Iifoto ezininzi ezintle ziye zaya kwintsholongwane (zaziwa ngokuxhaphakileyo) ezingaswelekanga nakuphi na ukwaziwa komniniyo. Oko kuthetha ukuba, ngaphandle kwayo nayiphi na indlela yokuba abanye banike umbulelo, umbulelo okanye intlawulo kumnini. Isisombululo kule ngxaki yiWatermark, injongo yayo kukufaka iifoto zakho kunye nesazisi sakho ngeendlela ezahlukeneyo, ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Itekhnoloji kwiWatermark kunye nezixhobo zeewatermark ezili-12 zikunceda ukuba utyikitye, wenze ubuqu, wenze isitayile, ukhusele kwaye ukhusele iifoto zakho. Inika iindlela ezahlukeneyo zokuqinisekisa ukuba igama lakho, igama lenkampani, i-url okanye i-imeyile inxulunyaniswa neefoto zakho.
-Thintela ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda (ip) ukubambana
Sebenzisa i-iWatermark kunye neendidi ezili-12 ezahlukeneyo zamachiza anokunceda ukukhusela imifanekiso kunye nokufumana iifoto kwikhredithi efanelekileyo.
2 iiNkqubo, simahla kunye neNtlawulo
Kukho ingxelo yasimahla kunye nehlawulelweyo
iWatermark + yasimahla
Abantu abaninzi bazama isimahla kuqala ukuzama usetyenziso kunye neempawu. Inomfanekiso okhululekileyo kwibhanile eluhlaza. Ayinazintengiso kwaye ikuvumela ukuba usebenzise onke amanqaku kodwa ikongeza i-watermark yethu kuyo yonke ifoto ethi, 'Yenziwe ngeWatermark + yasimahla'. Wamkelekile ukuqhubeka nokuyisebenzisa okanye ukuphucula iapp ehlawulwayo engenayo i-watermark yethu eyongezelelweyo.
Olu hlobo luhlawulelweyo luxhasa ukuvela kweWatermark +. Ngalo lonke ixesha umntu ethenga ikopi ixhasa ngakumbi inkqubo ukuphucula usetyenziso olunceda wonke umntu. Yay! Uhlelo lokusebenza oluhlawulweyo alongezi i-watermark yethu kwifoto yakho kuphela. Emva kokufumana inguqulelo ehlawulelweyo khumbula ukuba ucime ingxelo yasimahla njengoko ungasayifuni.
Iisoftware ziyabelana ngezinto ozikhethayo nayiphi na iidwallark ozenzileyo eWatermark + Simahla yasimahla ziya kufumaneka kwiWatermark + xa uyithenga.
Zininzi ezinye iinguqulelo onakho Fumana kwindawo yethu.
OKUBALULEKILEYO: I-iWatermark + kuphela ii-watermark ikopi yeefoto zakho. Soze itshintshe ifoto yoqobo. Ukuphepha ungazicimi iifoto zakho zoqobo kwaye uhlale ukhumbula ukuzixhasa.
I-iWatermark + iza neelayibrari ezi-2 zemifanekiso eyongezelelweyo.
I-5000 SVG (ihambisa ngokugqibeleleyo kuzo zonke ubungakanani) yemizobo yazo zonke iintlobo zezinto kunye neempawu kunye
Imizobo ye-bitmap engama-50 (inokufakwa pixelated kwiifoto eziphezulu zokugcina) utyikityo lwabantu abadumileyo, iilogo, njl.
IWatermark + yenza kube lula ngokulula ukwenza ii-watermark kwaye kungekudala uza kufuna ukuzenzela ezakho. Gcina ii-watermark zakho ukuze uphinde uzisebenzise ukukhawulelana neemfuno ezahlukeneyo kunye neentlobo zeefoto.
IWatermark ayisiyo iapp kuphela kodwa ikwayiyo 'Ukwandiswa'enokusetyenziswa ngaphakathi kweapp yeefoto ze-iOS kunye nezinye iiapps. Oku kuthetha ukuba ngoku unokufikelela ngokukhawuleza kubuchule bokwenza i-watermark hayi kwi-iWartermark + kuphela kodwa nakwezinye ii -apps, oku kunokuba luncedo kakhulu.
Njengolwandiso olusetyenziswe ngaphakathi kweApple's Photo app, iWatermark watermark kodwa ukugcinwa kugcinwa yiApple yeApple. Insiza yeefoto igcina lonke utshintsho kwifoto kuloo foto, ke i-watermark kunye nolunye utshintsho lugcinwa njengamaleko. Ukuba ufuna ukuyisusa utshaye uHlelo kwakhona kwaye ubethe Buyela umva ukuze ubuyele kwifoto yoqobo.
1. Khetha imidiya (ifoto, iifoto okanye ividiyo).
2. Emva koko ukhethe (gqamisa okanye uphawule) watermark okanye watermark. Okanye, ngokuzikhethela, yenza entsha kwiindidi ezili-12 ze-watermark, hit 'Done'
3. Gcina okanye wabelane ngefoto yakho ebukelweyo kwiKhamera yeCamera (oku kuyibeka kwiCamera yeKhamera kunye nakwiWatermark + Album), i-imeyile, iFacebook, iTwitter, iLinkedIn, iPinterest, iBuffer, okanye i-Evernote, njl.
Vula iWatermark +. Le nto siyibiza ngokuba yi Iphepha leCanvas. Apha uqala ukudala kunye nokujonga kuqala umsebenzi wakho wobugcisa. Emazantsi ibha ye-Nav.
1. Okokuqala, chukumisa 'Khetha Imidiya'icon
ezantsi ngasekhohlo kwesithombe-skrini ukukhetha isithombe, iifoto, ividiyo okanye ifayile yokungenisa (kwinkonzo yelifu).
Chukumisa i icon 'yeWatermark'
emazantsi ephepha leCanvas elingentla (ngentla) ukubona uluhlu lwee-watermark kwinto esiyibiza ngokuba yi Uluhlu lweeMveliso zamanzi iphepha (ngezantsi). Unokukhetha kwakhona 'Yenza iWatermark' phezulu kwiphepha ukwenza i-watermark entsha yesiko kodwa ubambe olo lonwabo okomzuzwana kwaye endaweni yoko khetha i-watermark ebandakanyiweyo. Yiya kwindawo elandelayo engezantsi ukwenza oko.
3. Thepha ngokulandelayo kwicala lasekhohlo le-watermark 'Ilungelo lokushicilela' (umfanekiso ongasentla). Kwimpompo i-watermark isuka ngwevu / ingasebenzi iye kohlaza okwesibhakabhaka / esebenzayo / ephawulweyo / enophawu lokujonga oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphambili ukubonisa ukuba iyasetyenziswa ngoku. Chukumisa iqhosha elithi 'Lenziwe' ukubuyela kwesona sikrini siphambili (apha ngezantsi) kwaye ngoku uya kuyibona loo watermark yeLungelo lokushicilela kwiphepha leCanvas.
4. Lungisa ngokuchukumisa nangokuthinta (ngentla). Okanye yiya kuseto ngonqakrazo kabini kwi-watermark okanye uchukumise i icon icon (ngasentla).
OKUBALULEKILEYOUmzekelo ongentla usebenzisa i-watermark e-1 kodwa iWatermark + ayivumeli nje u-1 kodwa ukhetha u-2, 3, 4… okanye ii-watermark ezininzi ngaxeshanye.
5. Kwiskrini esikhulu cofa iqhosha lokwabelana kwi-nav bar ukuze wabelane ngefoto yakho yokuqala enamanzi. Kwi-iOS 13. Ijongeka ngoluhlobo. Cinezela 'Gcina umfanekiso' ukugcina 'Okwakutsha nje' kodwa nakwi 'iWatermark + Ifolda' ngaxeshanye.
Yay! Ubukele umfanekiso wakho wokuqala, olula. Kodwa linda! Qhubeka ngokulandelelana thru ngesandla okanye ucofe ukuya yiya ngqo ekwenzeni i-watermark yakho yokuqala.
I-Canvas yiphepha lokuqala olibonayo xa ufaka iWatermark +. Kukuboniswa kwemifanekiso kunye nalapho unokucwangcisa khona kwaye ujonge ii-watermark ezahlukeneyo ofuna ukuzisebenzisa. Ukwabelana ngeli phepha lithumela imifanekiso yakho ebonakalayo. Ezantsi kwephepha kukho ibha yokuhamba.
Thepha kwaye utsale i-watermark kwiphepha le-Canvas. ICEBISO: Ukuba i-watermark incinci kakhulu xa uthe wayikhupha kanye unokuyitsalela kwaye uyirhuqe kude.
Sebenzisa ipinki kunye / okanye usondeze ukutshintsha ubungakanani bewatchark.
Ukujikeleza i-watermark ibeka isithupha kunye ne-forefinger kwi-watermark kunye ne-twist.
Chukumisa kabini i-watermark ukuya ngqo kuseto lwalo watermark.
Khulisa indawo encinci yesikwere se-canvas ngokuthinta kwaye cinezela (ekwabizwa ngokuba yi-3d touch).
Emazantsi ephepha yi 'Bar yokuKhangela'.
Ezantsi kweKhasi le-Canvas yile bar yokuhamba. Ngayinye yee icon ezikwi-navbar ikuthatha ukuba ubeke kwiphepha elongamela icandelo elinye le-watermarking.
Izinto ezingaphezulu ngolungelelwano zibhalwe apha ngezantsi:
Khetha Imidiya | Ulwazi | Uluhlu lweLamanzi | Izicwangciso | Ukwabelana | Nceda
Ibheji 2 kwi-icon yesitampu ibonisa inani lee-watermark ezikhethwe ngoku.
Iphawu lokwabelana liza kubonisa ibheji yenani leefoto ezilungele ukuba zabiwe.
Xa uchukumisa i icon 'Khetha iMedia'
Le ncoko yokungenisa ifoto, iifoto, ividiyo, ukuhambisa ifoto okanye ukungenisa iifayile (ilifu) kuboniswe ngezantsi.
Apha unokukhetha ukuvula ifoto, iqela leefoto, ividiyo, ukuthatha ifoto, ukucola ifoto okanye ukungenisa ifayile. Iinkcukacha koku kungasentla, ngezantsi.
Khetha Ifoto - ngumkhethi we-Apple wokukhetha ifoto enye
Khetha ifoto - ngumkhethi wethu wezithombe ovumela ukuba ukhethe iqela leefoto. Thepha enye kwaye utsalele ukhetho oluqhubekayo. Okanye ucofe kube kanye kumfanekiso wokuqala kwaye kabini okokugqibela ukhethe yonke into ephakathi (iluncedo kakhulu).
Nameka ifoto -Ivela kwinto oyikhupheleyo ngaphambili.
Ngenisa ifayile - (kwi-iOS) ivula iApple 'yeFayile' App ukuvumela ukukhetha kwiinkonzo zefu ezinje nge-iCloud, iDropBox, i-OneDrive, iGoogle Drayivu, njl.
Khetha ividiyo -Ivumela ukukhetha ividiyo ye-watermarking.
Khetha imifanekiso ukuze ucime -Indlela efanelekileyo / elula yokucima iifoto kwi-iOS. Cofa umfanekiso emva koko uye kwifoto yokugqibela uze ucofe kabini ukukhetha zonke iifoto ukusuka kwinto yokuqala ethe yashukunyiswa kabini. Cofa kumgqomo wenkunkuma ukuze uzicime zonke. Qaphela.
ICEBISO: - Kwi 'Khetha Iifoto' ukukhetha imifanekiso emininzi: thepha kunye nomfanekiso emva koko uye kwifoto yokugqibela kwaye ucofe kabini ukukhetha zonke iifoto ukusuka kwinto yokuqala ecofwe kuleyo icofwe kabini. Yinto ephathwayo / ekhawulezayo emva koko uzama ukucima iifoto nangayiphi na enye indlela.
ICEBISO -Yila ifolda entsha: Ngokuzenzekelayo iWatermark + yenza eyayo ifolda «iWatermark +». Ligama elinokutshintshwa kukhetho (sicebisa ukuba lishiywe linjalo).
Kwi-Mac iintlobo zeefayile zibaluleke kakhulu ukuziqonda. Kwi-Apple u-Apple wenza isigqibo sokuyigcina ilula kwaye angabonisi ulwandiso lwefayile okanye iintlobo zefayile. Kodwa kulondolozo lwabantu abantu kufuneka bazi uhlobo lwefayile abayijongayo. Kubaluleke ngakumbi xa ungenisa i-logo (ekufuneka ijongeke kakhulu kufuneka ibe yi-.png). Ke, songeze amandla okubona ngokulula izandiso zeefoto kwiWatermark +
Ulujonga njani uLwandiso lweFayileCofa kwi icon yeendaba, qiniseka ukuba 'Khetha iifoto (ngolwazi) ' ukubona iithonjana ezibonisa uhlobo lwefayile, hayi 'Khetha ifoto'.
Cofa u ⓘ ngasekunene. Qaphela iintlobo ezahlukeneyo zefayile, i-heic, i-jpg, i-png, i-dng, i-gif, njl.njl. Cofa u ⓘ kwakhona ukujikeleza ubungakanani befoto, ixesha lokudala ifoto / umhla. Ulwazi olusebenzayo oko kukuthi kuphela ifumaneka kwisikhethi semifanekiso emininzi hayi kwisithethi esinye. Ewe ungasebenzisa iipikethi ezininzi kwiifoto ezingatshatanga. Abanye benu baya kubuza, "Kutheni kuphela kwisithethi semifanekiso emininzi?" Isizathu sokuba sidale isikhethi esinemifanekiso emininzi thina ngelixa isikhethi esinye senziwe yiApple.
Izimbo zomzimba ezifumaneka kwiPhepha loKhetho lweFoto
Kwi 'Khetha Iifoto' ukukhetha imifanekiso emininzi: thepha kunye nomfanekiso emva koko uye kwifoto yokugqibela kwaye ucofe kabini ukukhetha zonke iifoto ukusuka kwinto yokuqala ecofwe kulowo ucofwe kabini.
Ngomfanekiso okhethiweyo thinta
I-2nd icon ukusuka ekhohlo kwi-bar bar, ukujonga ulwazi lwefoto. Apha uza kubona iithebhu zeFayile, iFoto, iiCredits, uStegoMark kunye neqhosha leMetadata.
Igama lefayile, lenziwe, ubukhulu, inkcazo kunye namagama aphambili kwidatha ye-IPTC ukuba ikhona. Idatha yeGPS ukuba ikho isisombululo kwimephu.
Imifanekiso-ibonisa ulwazi lwe-EXIF kwikhamera.
Iikhredithi- eziqulathe idatha eyongeziweyo yomsebenzisi ukuba ibedded apho yiPhotoShop, Lightroom okanye iWatermark.
I-StegoMark -ukufunda i-StegoMark efakwe ngaphakathi. Kuqala vula ifoto nge-StegoMark. Ukuba wena okanye omnye umntu usebenzise iStgoMark kwifoto emva koko ukuze ufunde umyalezo oqulathiweyo yiya kule paneli kwaye ufake ipassword okanye igama eligqithisiweyo (ukuba lenziwe ngaphandle kwephasiwedi) ukuveza umyalezo wombhalo. Akukho gama lokugqitha lithetha ukuba nawuphi na umsebenzisi weWatermark + unokuwucacisa umyalezo. Nje ukuba ufake ipassword ukuba kunqakraza iqhosha 'Khangela' ukuveza umyalezo obhaliweyo.
Imethadatha -qhosha phezulu ngasekhohlo kwi-EXIF, IPTC, njl.
Ulwazi lobuchwephesha malunga nomfanekiso (EXIF) lwenziwe ngekhamera. Ulwazi lomxholo (IPTC / XMP) lwenziwe kwaye longezwa nguwe, umfoti. I-ExIF, i-IPTC, i-TIFF, i-XMP zonke iifomati zokugcina ulwazi kwiifoto. Ziye zavela emva kwexesha. Ukuze ufunde ngakumbi ungasebenzisa iibrowser zakho ukufumana ulwazi oluthe kratya.
Iividiyo zinolwazi. Xa ividiyo ikwi-screen esentloko cofa kwi
i-icon ukufumana ulwazi malunga nevidiyo.
Isithuba 'seVidiyo' sibonisa ulwazi lobuchwephesha kule vidiyo.
Ukuba i-metadata watermark yenziwe (ngezantsi) kwaye isetyenziselwa ukubheka ividiyo ngale lwazi.
Ke xa le vidiyo ingenisiwe iya kuvela phantsi kwethebhu 'yeeCredits' yoLwazi lweVidiyo ngolu hlobo:
Uluhlu loluhlu lweeWatermark kulapho unokukhetha khona ukwenza ii-watermark (phezulu) kwaye ugcine wonke umzekelo kunye nee-watermark zakho (ezantsi ngezantsi). I-watermark okanye ii-watermark ezikhethwe kolu luhlu lweWatermark ziyavela kwiphepha le-Canvas. Ukusuka kuLuhlu lweeMveliso zamaphepha iphepha onokulikhetha, uliphinde, ulicime, ulikhanye, ungenise ngaphakathi kwaye uthumele ii-watermark.
Thepha 'Hlela' phezulu ngasekhohlo emva koko ucofe i-icon yokudonsa kwicala lasekunene phezulu okanye ezantsi ukuhlela kwakhona iodolo yewatch nganye. Okanye ucime ii-watermark ngokuchukumisa ibhola ebomvu kwicala lasekhohlo.
Cofa iglasi yokukhulisa (phezulu) ukukhangela ii-watermark ngegama.
Kwimpompo ephezulu '+ Yenza i-watermark entsha' okanye i icon + ezantsi. Oku kukuthatha kwiphepha elitsha 'leWatermark' (umfanekiso wesibini ophezulu ngasentla). Ngolwazi oluthe kratya ekwenzeni i-watermark entsha, cofa umfanekiso-skrini ongezantsi.
Cinezela i-icon yamehlo kwi-nav bar esezantsi ukujonga kuqala i-watermark kwifoto yakho.
Cinezela -> | ukuhamba ngokukhawuleza kwi-watermark elandelayo ebonisiweyo.
I / icon ayikhethi zonke ii-watermark ezikhethiweyo. Utshintshela kwi…
✓ icon kwi-bar bar esezantsi ungacofa ukuze ukhethe ngokuzenzekelayo zonke ii-watermark ezikhethwe ngaphambili.
“Sukukhetha Zonke iiWampermarket” / “Phinda ukhethe amaWatchmark ngasemva” - indlela ekhawulezayo yokukhetha zonke ii-watermark. Kwaye ukuzikhetha zibuyele ngakwicala elinye. Ezi ntshukumo zidweliswe kanye phezulu kwiphepha leWatermark, nakwibar yesixhobo.
Ukuthepha okukodwa kwicala lasekhohlo lwewatch ukuze ukhethe, nokumakisha kunye nokuphakamisa iblue. Ukungakhethi itephu kwakhona kwicala lasekhohlo.
Khetha ii-watermark ezininzi cofa kwenye ukuze ukhethe nayo.
Ukuthepha okukodwa kwi icon yezicwangciso
okanye naphi na ekunene kwisithathu se-watermark, ukuya kwiphepha leseto lale watermark.
Cofa naphi na kwicala lasekhohlo lesibini kwewatch ukuyikhetha.
Cofa kabini i-watermark uyikhethe kwaye ukhethe zonke ezinye emva koko zikuse kwiphepha lokujonga kuqala.
Thepha kunye ne-watermark eshiyekileyo ukubonisa "uPink / Un-pin / Cima / Yenza amaqhosha" amaqhosha. I-Pin insurance ukuba i-watermark ayinakuchazwa.
Phezulu kuluhlu 'lweWatermark' yile 'Yenza iWatermark eNtsha'. Thepha oku uze ukhethe ukwenza uhlobo lwe-watermark olubonwe ngezantsi.
Funda ngohlobo ngalunye lwewatermark apha ngasentla 'Iindidi zeWatermark' icandelo.
Q: Ndiyigcina njani i-watermark okanye ii-watermark?
A: Cofa apha kwaye ufunde yena
Q: Ndiyenza njani ikopi yamatikiti?
I-1) Ukutshintsha igama layo nayiphi na i-watermark iya kuyiphinda. Ukuvavanya ukubeka u-2 emva kwegama, ukubetha kwenziwe, ngoku unayo i-watermark entsha efana ngqo neyaleyo.
2) Kwiphepha leWatermark slide i-watermark ekhohlo ukuveza ipini, ukuphinda kabini nokucima amaqhosha.
pin -Cofa i-watermark ke ivuliwe (ihlala ikhethiwe) ngalo lonke ixesha. I-watermark ngoku iya kubonisa i-icon encinci kwicala lasekunene. Ukukhetha kwakhona akuyi kuyicima. Oku kwenzelwa ii-watermark ozifuna ngalo lonke ixesha kwaye awufuni ukucima ngengozi. Ukutshintsha isilayidi kwaye ukhethe kwakhona 'Un-pin'.
Yenza impinda -Uthatha i-watermark oyithandayo kwaye uyihambise. Ungayisebenzisa njengendawo yokuqala i-watermark entsha.
Susa -Isusa loo watermark ngokupheleleyo. Akukho kubuya nayo.
ICEBISOukujongwa komhlaba (ngezantsi) kususa inqanaba (umphathi, ixesha, ibhetri) ngaphezulu, ukubonelela ngendawo engaphezulu.
Ividiyo ekhawulezileyo engezantsi ibonisa ukuba yenziwe njani. Kwividiyo ibhekisa ku 'Tshixa' silitshintshe igama laba ngu 'Phina'.
Guqula useto lwewatchark yokugcina i-watermark ekhethiweyo. Ukucofa ukumisela uphawu
kwiphepha eliphambili lokuya kwiphepha lokuseta i-watermark ekhethiweyo ngoku. Ungaphinda ucofe i-watermark kwiphepha eliphambili ukuya kuseto lwalo watermark nayo.
Yabelana / Thumela ngaphandle
OKUBALULEKILEYO: IApple ivumela izinto ezininzi ukuba zabelwe kwiAlbhamu yeKhamera kodwa inye kuphela into ngexesha lokongezwa kokwabelana. Ukulungiswa kweBatch kukwi-albhamu yekhamera ye-Apple kuphela.
Ukwabelana kuvumela ukuthumela imifanekiso yakho ebonakalayo kunye neevidiyo ezandisiweyo nge-imeyile, gcina kwi-albhamu yekhamera, kwi-airdrop, yoshicilelo, ikopi, i-Instagram, i-Facebook, i-Twitter, njl njl. I-Dropbox, Tumblr, Pinterest, Evernote, Buffer, LinkedIn njl.njl. Ukwabelana ngezandiso kufakwa kwi-software kwaye kuvumela ukwabelana ngeefayile kuloo nkonzo. Umzekelo khuphela i-Pinterest kwifowuni yakho kwaye ngoku uya kufumanisa ukuba ungabelana nge-iWatermark + okanye iiFoto app ngqo kwi-akhawunti yakho yePinterest. I-Tumblr, Evernote kunye nezinye iinkonzo abazenzele ezabo ii-app ezakhiwe ngokwabelana ngazo.
Kwisikrini esingezantsi uqaphele ukuba kukho inani le-3 yesithathu yokwabelana ngeendlela zokukhetha, i-Instagram, i-Facebook, iTumblr, i-Pinterest, i-Evernote, i-Hootsuite, i-Buffer kunye nenani elikhulayo lokwabelana ngee-apps ezixhasa olu tshintsho lolwazi. Skrolela ekunene ukuze ubone ngakumbi. Ke, izandiso zokwabelana ezifumanekayo zixhomekeka kwizixhobo ozifakileyo.
OKUBALULEKILEYO: Ulahlekile ulwandiso lokuthumela ngaphandle? Ukuba unolwandiso lokuthumela ngaphandle njenge-Instagram, iTumblr, i-Evernote, iBuff, njl.njl kwaye awuyiboni kuluhlu uze uskrole uye ngasekunene kwaye ucofe i 'More ...' apho unokuvula khona abo sebenzisa, cima ezo ungazenziyo kwaye uhlengahlengise uluhlu.
Instagram -Khuphela usetyenziso lwe-Instagram kunye neWatermark + iya kuyibonisa kulwabiwo / kwindawo yokuthumela ngasentla. Thatha ifoto yesikwere kwi-app yekhamera ye-Apple. IWatermark kwiWatermark + emva koko ukhethe i-Instagram kwindawo yokwabelana (ngentla) kwaye iyakuthatha ifoto ene-watermark ngqo kwi-Instagram apho unokufaka khona iifilitha kwaye ulayishe ku-Instagram. IWatermark + yeyona ndlela ilula yokubukela ifoto emiselwe i-Instagram.
IINGXAKI: 'Ikopi kwi-Instagram' ayibonakali. Sithumela ngaphandle iifayile ezikhutshiweyo ngohlobo eziza ngalo. Ukuba ungenisa ifayile ye-heic emva koko iWatermark + ithumela ngaphandle ifayile yeheic. 'Ikopi ku-Instagram' ayiveli ngaphandle kokuba ifayile ethunyelwa ngaphandle yi .jpg.
SOLUTION: Sebenzisa i-.jpg ukubona 'Khuphela kwi-Instagram' kwiphepha lezabelo. Yizame kwaye uza kubona ukuba 'uKhuphela kwi-Instagram' ikhona. Sicinga ukuba i-Instagram izakuhlaziya usetyenziso lwayo ukuvumela ukusetyenziswa kweefayile zeheic kwiphepha lesabelo.
Ukwabelana nge-Facebook kwakhiwe kwi-iOS. I-Flickr, i-Twitter, i-Evernote, iTumblr, i-Buffer ikhuphele ezo zixhobo ukuze zibonise ukuba zisetyenziselwe indawo yokwabelana.
'Ukwabelana ngolwandiso' kuvumela ezinye iiapps ukuba zibonelele ngeendlela ezintsha zokuthumela ngaphandle kwiWatermark +
Ngelixa i-'Photo Editing Extension 'yangaphambili ivumela iiapps ezihlela iifoto kwiifoto ze-watermark zisebenzisa iWatermark +.
? / Malunga / / Iidrafti
Kwiphepha eliphambili chukumisa i? i icon esemazantsi ngasekunene ukuya kule ndlela iphantsi:
malunga -Iinkampani, iiprogram, ulwazi lwenguqulelo, thumela kumhlobo kunye nokulinganisa le app.
Support Tech -Unxibelelana njani nathi neengcebiso, iibugs kunye nemibuzo engaphendulwanga kule ncwadana.
Ezikhethwayo -Ezi zilungele ukuba zishiywe zinjalo ngaphandle kokuba uziqonda ngokupheleleyo. Oko kuthetha ukuba ukufunda le ndawo ingezantsi. Ukuba ufuna ukubatshintsha babuyele kuseto lwangaphambili ke ucofe iqhosha lokungagqibeki phezulu ngasekhohlo.
0. Ukungagqibeki -Chukumisa oku ukubuyela kuseto lwangaphambili olungagqibekanga
1. Umgangatho wokujonga kwakhona weRetina -IWatermark + isebenzisa isisombululo esisezantsi sokubonisa imifanekiso endaweni yesantya esiphezulu. Ukuvula olu seto kuya kunika imifanekiso ekrwada kwiscreen esiyixhasayo kodwa ithathe imemori engaphezulu. Nokuba kungasetyenziswanga, kuvuliwe okanye kuvaliwe, kuguqula umgangatho wokuthumela ngaphandle osoloko uphezulu.
2. Susa Indawo yeGPS -Ususa idatha yendawo ye-GPS eqhotyoshelwe kwifoto. Imethadatha yeGPS yinto evumela ukubeka iifoto kwimephu kwizicelo ezininzi. Ikwathetha ukuba ukuba wabelana ngefoto abantu banokuyifunda loo info ukuze babone ukuba ubuphi. Oku ngamanye amaxesha yinkxalabo yezokhuseleko. Umzekelo ifoto obelana ngayo kwi-intanethi ine-metadata ye-GPS ebonisa eyakho eYurophu izolo, oko kuthetha ukuba awukho endlwini yakho e-Iowa namhlanje kwaye ke kumqhekezi oku kunokuba lulwazi oluluncedo. Ukuba oku kuyinkxalabo, ukuseta olu khetho kuya kususa yonke idatha yeGPS kuzo zonke iifoto ezithunyelwe ngaphandle kwiWatermark +
3. Ucinezelo vs Ubeko lomgangatho Inani eliphezulu liya kuthumela umgangatho ophezulu kunye nobukhulu obukhulu. Inani elisezantsi lokuthumela ngaphandle kumgangatho osezantsi kunye nesayizi encinci yefayile. Inani elingagqibekanga linika ezona zibalaseleyo zombini. IWatermark + isebenzisa izixhobo ezifanayo / i-api yoxinzelelo lwe- .jpg njengeFotohop kunye nolunye usetyenziso. Ukuba uthatha isigqibo sokutshintsha oku qiniseka ukuba uyakuqonda ukunyanzelwa kwe-jpg, ubungakanani bomgangatho vs ubungakanani kunye norhwebo olubandakanyekayo kuphando olwenziwe kwi-Intanethi.
4. Shrinkr -Le khowudi yethu yobunini bokuncipha kweefoto ngelixa ugcina umgangatho ophezulu ngokubonakalayo. Isebenza kakuhle kodwa iyacotha, mhlawumbi iphindwe kabini njengokucotha.
5. Imveliso yeXesha ethunyelweyo -Oku kucwangcisa umhla wefayile kwifayile ekhutshiweyo ngokungagqibekanga efanayo kwifayile yoqobo. Oku kugcina iodolo yohlobo.
6. Thumela iAlbham yeAlbum yegama -Seta igama lefolda / ye-albhamu ethi iWatermark + ithunyelwe ngaphandle kwiAlbhamu yeKhamera. Kwakhona kubonakala kwi-app ye-Apple's Photos.
7. Ukujonga ukuqaqamba -Ukutshintsha ukuqaqamba kwemvelaphi yokujonga kwiphepha 'le-Canvas'.
8. Ukuphakamisa inqanaba lokusondeza iGlasi -Seta inqanaba lokusondeza kwiglasi yokukhulisa kwiCanvas Page. Chukumisa ubambe ukuze ubone iglasi.
9. Ukutyikitya Scan Umahluko - Olu tshintsho lwe-median emiselweyo yeyiphi imibala ye-pixel ethathwa njengemnyama okanye emhlophe kwii-watermark zoTyikityo ezisandula ukwenziwa.
10. Dlala izandi zeMpendulo - dlala izandi uphendula iziganeko.
11. Dlala 'ingxelo yeHaptics' I-haptis yinyikima eyenzeka ngokuseta into yomsebenzisi okanye umcimbi njengokwabelana. Oku komeleza imvakalelo yolawulo olubonakalayo.
12. Isilumkiso malunga namagama aqhelekileyo kwiiWatermark ekudaleni i-watermark entsha kukho isilumkiso sokwenza igama elichazayo lefayile. Esi sicwangciso sicima isilumkiso.
13. Sebenzisa isixhobo sokukhetha umbala seApple OS -Olu tshintsho ujongano ekukhetheni imibala yethu (emiselweyo) ukuya kweka-Apple kunye nasemva.
14. Ingxelo yovavanyo olongezelelweyo -Ukuba olu seto lukhona longeza iinkcukacha zobuchwephesha kunye nefoto oyivulileyo. Sifikelele kwiNkxaso yeTekhnoloji ukusuka phezulu kwincwadana kwi-nav bar kunye nokucofa 'kwiNkxaso yeTekhnoloji'. Ukuthumela i-imeyile ngale ndlela kunceda umxhasi wethu oqinileyo kodwa ophambeneyo ukulungisa iimpazamo / iimfihlelo ezingcwatyelwe kwiios ukwenza iinguqulelo ezintsha nezesabekayo zeWatermark +
IWatermark ineentlobo ezili-12 eziphambili zamanzi, okubhaliweyo, okubhaliweyo kwe-arc, i-bitmap, vector, umda, utyikityo, i-QR, imethadatha, iStegoMark, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, isihluzo sesiko kunye nokukhethwa kokuthumela ngaphandle. Siza kuqala ngeWatch Watermark kwaye siyisebenzise njengomzekelo ukubonisa lonke useto.
Ngaphambi kokuba uqhubeke kubalulekile ukuba uqonde ukuba uhlobo ngalunye lwe-watermark lunephepha leseto, uhlobo ngalunye lwe-watermark lunezicwangciso zalo kunye nokuseta ngokufanayo nabanye. 'Umbhalo weWatermark' unezona zicwangciso kwaye ke ufumana ezona ngcaciso zininzi kuseto kwindawo enye.
Iitermark zewindows kulula ukuyila. Okubhaliweyo kubukhali nangayiphi na ubungakanani kwaye kuxhomekeke kwifonti ekhoyo. I-iWatermark + inika ukufikelela kwiifonti ezingama-292 ezintle.
Ukuqala, kwiphepha eliphambili, chukumisa i icon enkulu ekhohlo kwaye ukhethe ifoto njengemvelaphi ukunceda ukudala kunye nokujonga i-watermark yakho. Emva kokuba udale i-watermark emva koko unokuyisebenzisa ukubona iifoto ze-watermark.
1. Chukumisa okubhaliweyo… umba ophezulu kwiphepha leentlobo ze-watermark (kuboniswe ngezantsi).
2. Oku kuya kukhokelela kwiphepha le-Setermark yeeswallark. Bhala apha igama kunye nesicatshulwa.
3. Useto luba ngwevu ude ubethe u'Yenziwe 'kube kanye. Oko kuyakwenza useto olungezantsi lusebenze kwaye emva koko unokuhlengahlengisa isikali, i-opacity, njl.njl.Ukuba ubethe 'Kwenziwe' kabini uza kubuyela kwiscreen esikhulu apho unokukhetha khona useto lwe icon ukuba loo watermark ibuye.
Guqula izilungiselelo ezinje kule vidiyo.
Lungisa useto ngokujonga kwangaphambili.
OKUBALULEKILEYO: Zonke iisetingi ziyasebenzisana njengoko kubonisiwe kwividiyo engentla. Oko kuthetha ukuba xa uslayida ubungakanani besilayidi umbono otshintshileyo kwifoto ukuze ukwazi ukurhangqa ngapha nangapha ukubona nokukhetha ubungakanani ngqo obufunayo. Chukumisa isilayidi kwaye ubambe phantsi usiya ngapha nangapha de ubone umphumo ofuna ukuwuyeka. Oku kukuvumela ukuba usete ubungakanani, opacity, njl kwaye ngokukhawuleza ubone iziphumo zohlengahlengiso lwakho kwifoto.
Izicwangciso ezikwi-skrini apha ngasentla zichazwe kwezi zihloko zingezantsi.
Chwetheza igama le-watermark. Iqhosha eliphezulu ngasekunene liya kutshintsha libe 'nguQamba kabusha'. Cofa u-rename ukugqiba ukunika igama le-watermark. Amagama acacileyo nachazayo yeyona ilungileyo. Kuyanceda ukuba ufumane kamva. Ngoku, ukuba ufuna ukutshintsha igama kwakhona, iqhosha elisekunene litshintshele ku 'Phinda ikopi' kwaye ucofe kulo liya kukubeka kwikopi yelo watermark yoqobo.
Chwetheza umxholo wakho wokubhaliweyo. Ukuba nombhalo wemigca emininzi ucofe iqhosha 'lomgca omtsha' eliboniswe ngezantsi ngasekunene kwebhodibhodi. Isimo esitsha esibizwa ngokuba 'Ulungelelwaniso' siyavela. Khetha kwiNdalo, Ekhohlo, iZiko nasekunene kwaye iya kulungelelaniswa ngoluhlobo xa ujongwa kwifoto kwiscreen esikhulu. Ukucima konke okubhaliweyo cofa kwi icon ye-x ekunene kwicandelo lokubhaliweyo. Faka i-Tag kubalulekile ucofe apha ukuze ufunde ngakumbi.
Khetha enye yeefonti ezininzi ezifumaneka kwiWatermark. Isicatshulwa kunye nefonti iboniswe ngqo kubungakanani befonti, wouwig (into oyibonayo yile uyifumeneyo).
Jonga umgca ngokuthe ngqo kwi-watermark yakho kwifoto yakho ngokubamba kwaye ubambe ongezantsi kwiso elincinci
Imigca kunye nemibala oyisebenzisa ngalo lonke ixesha inokuthandeka ukufikelela ngokukhawuleza. Cofa kwifonti oyithandayo ukubetha intliziyo ukuguqula i-icon eluhlaza okwesibhakabhaka kwaye itshintshele kwiphepha elitsha kwaye yongeza ifonti apho. Cofa intliziyo nanini na ukuze ubone izinto ozithandayo.
Thepha i icon yelayisi ukuba utshintshe ngokungacwangciswanga ifonti kwaye uyibone kwangoko imbonakalo.
Ukubuya kunye nokuya phambili kweempawu ze-icon kukuthatha ubuye umva kwaye uye phambili kwiifonti ezingahleliwe.
ICEBISO: Sebenzisa indawo yokukhangela ephezulu ukukhangela ngegama (ngokulula ukuskrola iifonti ezingama-300) okanye iintlobo zefonti ezinje nge "mono" okanye "iskripthi" kunye neentlobo zolwimi ezinje nge "Indian", "Russian", "Japanese", " IsiKorea "," isiThai "kunye" nesiArabhu ".
Xa uthanda ifonti (ngaphezulu) iyibeka kule ndawo yolawulo yamafonti. Oku kukuvumela ukuba ube nefonti oyithandayo kwiingcebiso zakho zomnwe. Akusekho sikroba kumakhulu amawaka amafonti.
Chukumisa kwaye utsale isilayidi emva nangaphambili ukufumana ubungakanani obufanelekileyo. Ukucofa kunye nokusondeza i-watermark kwifoto nako nako ukusebenzisa xa ukwiphepha eliphambili.
ICEBISO: Ukuchwetheza ubungakanani ebaleni ecaleni kwesilayidi kunokunika ubungakanani ukusuka kwi-0 ukuya kwi-150%. Ngelixa isilayida sivumela kuphela ukurhuqa phakathi kwe-0 ukuya kwi-100%. Kuyenzeka ukuba uchwetheze kwiidesimali ezinje ngama-75.5 ngokobungakanani ngqo.
Tsala isilayidi ukuze ujikeleze i-watermark. Okanye chwetheza entsimini iyonke (umz. 14) okanye i-decimal (umz. 14.5) kwinkundla. Kuyenzeka kwakhona ujikeleze i-watermark ukusuka kwiphepha eliphambili. Beka iminwe emibini kwi-watermark kunye twist ukujikeleza.
Seta i-opacity / ukucaca kwebala lewotshi. Ekunene ngokungaphaya ngasekhohlo nasekunene.
Misela umbala we-watermark ngokupeyinta umbala.
Hlela Useto lweMibala -Ukujonga zonke iinketho ezingentla cofa ukuhlela phezulu ngasekunene okanye i icon yezicwangciso ezantsi ukuhlela umbala. I-RGB okanye i-HSL ixabiso njenge-0..255 inani elipheleleyo, okanye njenge-00..F hexadecimals. (ngezantsi).
Izintandokazi - Ezantsi cofa i icon yentliziyo ukuya kwiphepha lezintandokazi. Cinezela iseli ukunika loo mbala kwiseli.
Idropha yeliso-Cofa i icon yakhe ukuya kwiCanvas Page kwaye usebenzise indawo yeglasi yokukhulisa ukukhetha umbala kwifoto yakho. ICEBISOSicebisa ukuba usebenzise le nto ukukhetha umbala wewatch oceke ngakumbi. Umzekelo ifoto yakho inokuba nokutshona kwelanga ngaphezulu kolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neentaba ngasekunene. ungakhetha omnye wemibala yegolide yokutshona kwelanga oyisebenzisela i-watermark yakho kwicala elimnyama lasekunene ezintabeni. Oku kuphelisa ukwazisa umbala omtsha kraca kwifoto enokuthi iphazamise ukungaguquguquki kunye nokuthembeka. Ubuqili bulungile kwii-watermark. Akukho sidingo sokubambisa abantu ngamehlo.
I-Radomize-ngasekhohlo kwe-eye-dropper luphawu lweedayisi. Thepha oko kwaye ufumane umbala ongacwangciswanga. Oku kufana nje kwiphepha lephepha apho i-radomize icon yenza into efanayo ngaphandle kweefonti.
Nantsi ividiyo yenye yezi nkcukacha.
OKUBALULEKILEYO: Kukho aba-2 abakhethayo ngombala ochazwe apha ngasentla kwaye ubonwa njengowokukhetha umbala ongagqibekanga. Enye inokubonwa ngokutshintsha enye yezinto ezikhethiweyo ezibizwa ngokuba, 'Sebenzisa i-Apple OS Colour Picker'. Yijike kwaye ubuyele kwisikhethi semibala kuyo nayiphi na i-watermark kwaye uya kuyibona i-Apple oyibonayo kwii -apps ezininzi. Ukhetho lolwakho.
Akukho namnye-ovumela ukukhetha umbala wombhalo
Bhala kunye ne-Emboss - iziphumo ngokungafihli. Zombini zenzela ii-watermark ezibalaseleyo nezifihlakeleyo.
Ukuba ukungafihli kweyona miphumo ilungileyo ifezekiswa xa umbala wombhalo umhlophe okanye umbala okhanyayo. Xa isicatshulwa simnyama okanye simnyama, kuncinci kakhulu ukuba kukho umahluko obonakalayo phakathi kokukrola, i-emboss kunye nanye.
Cwangcisa umbala kunye opacity yesithunzi somlwelwe.
Off, Engrave okanye umphumo wempembelelo. Ifumaneka kuphela kwiitermark zoMbhalo kunye neeArc. Iziphumo ezilungileyo zifunyanwa xa umbala wombhalo umhlophe okanye umbala okhanyayo. Xa isicatshulwa simnyama okanye simnyama, kuncinci kakhulu ukuba kukho umahluko obonakalayo xa fx ivuliwe okanye icinyiwe.
Khetha umbala kunye ne-opacity yemvelaphi yesikwere ejikeleze i-watermark.
Ukuba ungumsebenzisi wesiqalo, chukumisa kwaye utsale i-watermark ukutshintsha indawo yayo yanele kakhulu kwiimeko ezininzi kodwa ukubeka indawo okanye ukusetwa kweTiles kuvumela ukuchaneka ngakumbi.
FYIIsikhundla sihambelana kwiWatermark +. Ukuma kwento kugqitywa yi-% ukusuka kwimiphetho. Oko kuthetha ukuba akunandaba nokuba ungakanani na okanye ubenakho ukujongwa ifoto uya kufumana iziphumo ezifanayo. Ubungakanani beWetsermark / isikhundla ziyachaphazeleka kubungakanani bemifanekiso. I-watermark iya kubekwa kwindawo enye kwifoto nganye ngokungakhathaleli ubungakanani kunye nokuqhelaniswa nefoto nganye kwibatch. Umzekelo: kwiqela leefoto ezi-2, enye isezantsi kunye nesinye esona sigqibo siphakamileyo, umda watermark usekwe ube ziipesenti ezili-10 ububanzi kwifoto enye yesisombululo esisezantsi xa ulinganiselwa kwiipikseli ezingama-20 ububanzi kwifoto yesisombululo esiphezulu. Le yenye into ebaluleke kakhulu eyenza iWatermark + ikhethekileyo kwaye ixabiswe ngabathathi beefoto abaziingcali.
Indawo yokubeka i-watermark inokubekwa ngeendlela ezi-3:
Thepha kwaye utsale i-watermark kwiphepha le-Canvas.
Ngokuchukumisa isicatshulwa esiqaqanjisiweyo malunga negama 'Indawo'. (Ekhohlo-ezantsi, Ekunene-Phezulu, njl njl njl. Jonga umfanekiso ongezantsi) okanye ucofe kabini i-icon icon.
Ngolawulo oluchanileyo ngakumbi (ngepikseli) ngaphezulu kwepompo yendawo ethengisa amanzi kwi-Nudge ezantsi.
Ke kwiCanvas iphepha uyakukubona oku:
ongayisebenzisa ukukhuphela i-watermark ijikeleze kwizinyuko ezincinci.
Xa ususa i-watermark kwindawo oyibekeleyo uyayipina apho. I-watermark ephikiweyo ibhekisiwe ngasekhohlo, embindini okanye ngasekunene nangaphezulu, embindini nasezantsi. Kwisikrini esingezantsi kwewatermark 'kusekhohlo' kunye 'Phezulu'.
Khetha ikona efihliweyo. Cofa eKhohlo, embindini, okanye eKunene naPhezulu, embindini okanye emazantsi.
ICEBISOUbume bewatchark iboniswa yimifanekiso emhlophe yeeblue eluhlaza okwesibhakabhaka kwiphepha lokujonga kuqala (jonga ngezantsi). Zama ukuhambisa i-watermark ujikeleze ngomnwe wakho kwaye ubone i-icon icon ishukumisela kwamanye amakona njengoko usondela kuwo. Chukumisa kabini iphini ukuya kuseto yendawo.
Ngaba yezehlo ezikhethekileyo apho ufuna ukubeka i-watermark kuyo yonke ifoto lonke amaxesha amaninzi okwenza kube nzima ebantwini ukukopa okanye ukusebenzisa iifoto zakho ngokutyala. Vula ngokushukumisa iswitshi yokuqala kwiSikhundla esiboniswe kumfanekiso ungasentla. Tshintshela eluhlaza okokufaka iithayile.
Iisetingi zokwenza iithayile zibonakala ngokucacileyo. Hambisa izilayidi kwaye ujonge ngokukhawuleza utshintsho.
Ubungakanani-ukunciphisa / ukwandisa ubungakanani obubonisa iikopi ezingaphezulu / ezimbalwa zelo watermark kwifoto.
Umsantsa - umsantsa phakathi kwekopi nganye.
I-Offset ejikelezayo-ihambisa zonke iikopi ngasekunene okanye ekhohlo
Vertical Offset-ihambisa iikopi phezulu okanye ezantsi.
I-Angle-itshintsha i-engile yazo zonke iikopi.
Opacity -Ukutshintsha ukungabonakali kwewatermark yazo zonke iikopi.
Ukuzama ukufaka i-tiling kuqala. Ngokwesiqhelo ukwenziwa kwethayile kwenziwa nge-watermark esetyenziselwa ukongeza ukhuseleko kwifoto. Kodwa, ngokuzonwabisa ungakhanyisa iitermark ezi-1 okanye ezingaphezulu ngaxeshanye ngesiphumo esikhethekileyo.
I-tiling apha ngasentla isebenzisa i-1 Watermark yoMbhalo kodwa kunokwenzeka ukuba usebenzise ii-Arcs zoMbhalo, iMizobo kunye nezinye iintlobo zewatermark. Zingaba ezicekeceke ngakumbi ngaphezulu koko kungasentla kodwa besifuna ukwenza uvavanyo lube libonakala nokuba lincinci kangakanani kulincwadana yemigaqo.
Faka ©, ™, ®
Faka Iimpawu ezikhethekileyo. Phezulu kwebhodibhodi kuseto 'lweWatch Watermark' yile:
I-3 yokuqala yipompo ebonakalayo ebonakalayo ukufaka abo bantu (i-copyright, uphawu lwentengiso ebhalisiweyo kunye neempawu zophawu).
Iimpawu ziluncedo ngendlela emangalisayo! Sebenzisa 'Faka iTag' ngaphezulu kwebhodibhodi (ebonwe ngasentla) ukubeka iMetadata (njengemodeli yekhamera, umhla wokudala, amanani alandelelanayo, igama lefayile, indawo, njl.njl.) Ukusuka kuloo foto okanye ividiyo kwi-watermark ebonakalayo kuloo foto okanye ividiyo. Kukho eminye imizekelo yee-watermark eza ne-app kodwa ungazisebenzisa ukwenza i-watermark yakho eyenziwe ngokwezifiso ukubonisa uluhlu lolwazi kwiifoto zakho oluya kwahluka ngokuxhomekeke kwimethadatha kuloo foto.
Sebenzisa iithegi ukuchukumisa iqhosha elithi 'Faka iTag' usiwe kweli phepha:
Kumfanekiso wekhusi ongasentla ezantsi 'Bonisa Zonke iiTagi' ibonisa ngokungagqibekanga. Xa 'Iithegi eziFumaneka Kuphela' zikhethwa kuphela iithegi ezingaphakathi kwifoto ekhethiweyo eza kubonisa.
Ithegi nganye inefomathi, ihlala iqala nge-% ukwenzela ukuba inkqubo ichonge ukuba iyimpawu. Ngaphantsi kwethegi yilwazi oluvela kwimethadatha kwisithombe esikhethiweyo. Ukuba akukho foto likhethiweyo (ifoto ebonisa kwiphepha le-Canvas) ulwazi lomzekelo luhlobo oluqhelekileyo.
Ukutshintsha ngakunye okugcina imethadatha ethile kwifoto. Apha unokuchukumisa enye yezinto eziguquguqukayo zemethadatha (iithegi) ukufaka olo lwazi lomfanekiso njenge-watermark yombhalo. Umbhalo watermark ungafomatiwa kunye nomnye umbhalo owongeziweyo ukunceda ukuchaza nokuchaza i tag.
Ukubona oku kusebenza, chukumisa enye yezi tags zingezantsi emva koko unayo i-watermark enje ngale.
Kumzekelo ongentla i-% CAM1 ngumahluko ogcina ulwazi lwemodeli yekhamera ekhutshwe kwifoto nganye. 'Ikhamera:' yinkcazo / ileyibhile yolwazi oluya kuyilandela. Kwibhetshi yeefoto ezivela kwiikhamera ezahlukeneyo ezinokuthi i-watermark iprinte ikhamera: I-Nikon eyokuqala, Ikhamera: I-Canon yesibini kunye neKhamera: I-iPhone 6 Plus kwi-3.
Jonga i-watermark esezantsi emazantsi efoto ebonisa ikhamera esetyenzisiweyo kunye nolunye ulwazi.
Kuyamangalisa oko ukongeza ii-watermark ezi-3 kunye nethegi zinokwenza ifoto.
ICEBISOIthegi eluncedo ngokukodwa yi-% WCNT. Sebenzisa oku ngebhendi yeefoto ukubeka inani elinyukayo eliqinisekileyo kwifoto. Ke, ukuba uneefoto ezingama-300 kwi-batch kwaye une-watermark yokubhaliweyo enale tekisi enje:
Inani% WCNT lama-300
Ke ifoto nganye iya kuba ne-watermark ethiwani ngeNombolo 17 ye-300.
Sihlala songeza kwiimpawu. Ukuze ufunde ngakumbi malunga nee tags yiya ku-Watermark yokuCofa ucofe u-Faka kwaye ujonge ulwazi kwithegi nganye.
ICEBISO: Akunakwenzeka ukuba ube neefonti ezahlukeneyo kunye nobungakanani befonti ngaphakathi kwewatch watermark enye ke ukuba ufuna ukuyenza loo nto yenza ezimbini zokubona ii-watermark.
Umbhalo weWatch Watermark uvelisa i-watermark yokubhaliweyo kwindlela egobile. Apha ngezantsi kukho useto lonke, useto ngakumbi emva kwayo nayiphi na enye i-watermark. Eyona ndlela yokuqonda oku kukuzama kunye nokuzivavanya. Inezicwangciso ezingaphezulu emva koko 'kokubhaliweyo' kwewatch. Ezi zicwangciso zongezelelweyo zichazwe ngezantsi.
Jonga inkcazo yokuseta kokubhaliweyo kokuqala Igama, isicatshulwa kunye nobungakanani kwi-watermark ebhalwe ngasentla.
Ukulungelelanisa isithuba phakathi koonobumba. Kuyafana nokukhetha kodwa ukwenza ikherishi kulungelelanisa isithuba phakathi koonobumba aba-2 ngelixa 'Isithuba' songeza okanye sithathe indawo phakathi koonobumba ngokulinganayo.
Lungisa ubungakanani berediyo kwi-% ukuya kuthi ga kububanzi obuthe nkqo okanye othe nkqo nakancinane kuncinci
Ubungakanani ukuya kuKulunga
Yenza ubungakanani ngokuzenzekelayo kwisangqa esekwe kubude bamagama kunye nobungakanani bamagama.
A ukuya ku ∀
Tsala isilayidi ukuze ujikeleze isicatshulwa esijikeleze umsesane. Okanye chwetheza entsimini iyonke (umz. 14) okanye i-decimal (umz. 14.5) kwinkundla.
Ilawula umbala kunye nokungafihli kwangaphakathi kwesangqa.d
I-Bitmap / i-logo
Iigraphic Watermark zilungile iilogo, ubugcisa kunye nesiginitsha. Sebenzisa uphawu lwakho okanye nayiphi na imizobo kodwa kufuneka babe yifomati ekhethekileyo ebizwa ngokuba yi-.png enembali ebonakalayo. Utyikityo lwesampulu, iisimboli kunye neminye imizobo esiyifakayo inemvelaphi ebonakalayo kwaye yeefayile ze-.png. Oko kuthetha ukuba nangona igraffiti isikwere kuphela utyikityo ngokwalo libonisa kwaye ingelilo utyikityo luyacaca ukuvumela umfanekiso ongemva ukuba ubonakalise. Ifomathi yefayile yokwenza oku ibizwa ngokuba yi .png ngokubonakala ngokucacileyo kwaye ivumela imvelaphi ye-watermark ukuba ibonakale (a .jpg ayikuvumeli oku kusekuhleni, .png kufuneka isetyenziswe).
Apha ngezantsi uyakufunda ukuba ungenisa njani i-png kunye nendlela yokwenza ifayile ye-png.
Q: Kutheni usebenzisa .png ngokubonakala kwebala lewotshi yelungelo lefoto?
png kunye Kuhleni
Imvelaphi emhlophe ibangelwa kukusebenzisa nokuba:
a) png ngaphandle ukucaca okanye
A: Zombini iigrafiki zesitampu esingentla zikwere.
Uphawu lwethu lwesitampu, yiPNG elubala. Le PNG ineendawo ezinobala, ke isitampu sibonwa sijikelezwe nje yimvelaphi.
Yigrafiki efanayo kodwa nokuba yi-jpg okanye i-.png ngaphandle kokubonisa ngokucacileyo ibhokisi emhlophe ibonisa njengemvelaphi isitampu sesibini.
Khangela FAQ (ngezantsi) okanye iGoogle 'png' kunye 'nokubonakala' ukuze ufunde okungakumbi ngokwenza .png iifayile ngokungafihlisiyo.
Ukwenza i-Graphic / ye-logo eyi-Watermark kufana nokwenza i-Watermark yokubhaliweyo. Umahluko kuphela kukuba singenise umzobo okhethekileyo.
Ukudlulisela ilogo yakho kwi-iOS
QNdingenisa njani ilogo / umzobo ovela kwisixhobo sam okanye kwiwebhu kwiifoto zeApple kwi-iPhone / kwi-iPad yam?
AKukho iindlela ezininzi zokungenisa ifayile kodwa usebenzise enye kuphela yazo.
I-imeyile (elula) - ilogo ye-imeyile okanye umzobo kuwe. Emva koko yiya kule imeyile kwisixhobo sakho esiphathwayo kwaye ucofe kwaye ubambe kwifayile eqhotyoshelweyo ukuyigcina kwizixhobo zeAlbham yekhamera.
I-Airdrop yeApple- ukuba uyayazi Airdrop inokusetyenziselwa ukungenisa ilogo / imifanekiso kwi-iPhone / kwi-iPad. Ulwazi kwi-Airdrop kwi-Mac. Ulwazi malunga nokusebenzisa i-Airdrop kwi-iPhone / iPad. Ukwabela uphawu lwe-png ukusuka kwi-Mac ukuya kwi-iOS, bamba iqhosha lokulawula kwaye ucofe ifayile yelogo kunye nomfumanisi kwi-Mac kunye nemenyu yokudonsa iyavela. Kule menyu khetha Yabelana kwaye kwimenyu elandelayo eyehlayo khetha i-Airdrop. Xa i-Airdrop ivela emva komzuzwana okanye emibini ifanele ibonise isixhobo sakho se-iOS, cofa kube kanye kwaye iya kubonisa inkqubela phambili yokuthumela ifayile kunye ne-beep ekugqibeleni. Ukuba akukho sixhobo se-iOS siyavela ke qinisekisa ukuba i-Airplay ivuliwe kwisixhobo sakho se-iOS.
Ukusuka kwi-iPhone / i-iPad okanye iMac unokukopa kwaye uncamathisele umzobo ngqo kwiWatch Watermark.
Ukusayinwa kweWatermark (uhlobo lwenkohliso) -inokusetyenziselwa ukungenisa utyikityo okanye ukuskena emfanekisweni. Ukuba unesihloko esimnyama (njengokutyikitya) kunye nemvelaphi ecocekileyo, eqaqambileyo emhlophe. Isebenzisa ikhamera ukuskena uphawu ephepheni kunye nokuvelisa ifayile yePNG. Sebenzisa umzobo wokuqala kuya kuba sisisombululo esiphezulu. Yiya apha ukuze ufunde ngakumbi.
OKUBALULEKILEYO: Sukusebenzisa iAlbum ekwabelwana ngayo ngeCloud ukungenisa .png / logo. ICloud itshintsha ifayile ye-png kwiJ jpg. Ukungabikho elubala ngoku kuya kuba nebhokisi emhlophe ejikelezileyo kwaye ayizukusebenza njenge logo. Le bug ibikwe kwi-Apple ekwabelwana ngayo ngeAlbhamu.
KUBALULEKILE: Kunzima ukumisela kwisixhobo se-iOS ukuba ifayile yile .png okanye hayi. Ke, senze indlela elula. Xa usenza iBitmap / logo yew watermark xa ucofa iqhosha elithi 'Khetha' uza kubona iithonjana, phezulu ekunene kukho i enesangqa esijikeleze i icon
ucofe loo nto kwaye iya kufaka umfanekiso ngamnye ngohlobo lwefayile, isisombululo, ubungakanani kunye nomhla / ixesha lokudala. Uncedo kakhulu.
Yenza i-Bitmap / i-logo yeWitermark
Yiya kwiphepha leWatermark, khetha 'Yenza iWatermark eNtsha' emva koko ukhethe 'iBitmap Graphic'. Ngoku kuseto lwe 'Bitmap Graphic' kukho amaqhosha ama-2:
'Khetha' ekuvumela ukuba ukhethe ilogo yakho kwi-albhamu yakho yekhamera okanye
'Cola' okuvumela ukuba uncamathisele izinto ozikope kwenye indawo.
Yiya kwi Useto lwephepha lale watermark kwaye utshintshe ukunambitheka kwakho.
Ungasebenzisa nayiphi na imifanekiso okanye ifoto kodwa i-99% yexesha .png graphic elubala iya kuba yile nto uyifunayo kwi-watermark. Yonke imizobo yemizekelo kwiWatermark yile .png's ekuhleni.
QKutheni le nto ndifumana uphawu lwesilumkiso ngasekhohlo iqhosha elithi 'Khetha' (umfanekiso weskrini esingezantsi)?
A: Thepha kwi-icon yesobunxele kwiGama okanye kwiGrafic (kwisithombe esingezantsi) iya kukuxelela ingxaki nesisombululo.
Q: Ndiyenza njani igraphic (ebonakalayo .png fomathi) ukuba ibe yindawo yokwalusa amehlo?
A: Uninzi lwabantu luyazifumana kuyilo okanye luyile ngokwazo. UGoogle 'uyenza njani ilogo?' okanye 'ndiyenza njani ilogo png ngokungafihlisiyo?'
Q: Kutheni ndifumana ibhokisi emhlophe, isikwere, uxande ejikeleze uphawu lwam?
A: Uthetha ukuba une-jpg hayi i-png. Nceda ufunde konke oku kungentla.
Ivumela ukukhetha umzobo kwiAlbham yekhamera kwifowuni yakho. Umfanekiso ofomathiweyo we-.png ungcono kuba unendawo ebonakalayo. Khetha kubonisa zonke izinto ezikwialbham yekhamera yakho. Jonga ngentla kwe-Q & A Ndingenisa njani i-logo yam.
Umfanekiso we .png ukuba unawo kwibhodi eqhotyoshwayo. Unokukhuphela kwenye i-app (njenge-imeyile okanye iifoto) kwaye unamathisele apha.
I-100% lithetha ububanzi okanye ukuphakama kweliphi na elincinci.
ICEBISO - Ukurhuqa kuhamba ukusuka ku-1 ukuya ku-100% njengoko kuchaziwe apha ngasentla kodwa ungachwetheza u-1 ukuya ku-300. Kuyenzeka ukuba uchwetheze kwiidesimali ezinje nge-105.5 ngobukhulu ngqo.
Isibuko ngokuthe tye kunye / okanye isibuko ngokuthe nkqo. Chukumisa kwaye ubambe ukuze ubone imbonakalo.
Guqula umbala wesiqulatho segraphic, njenge logo yakho, ukusuka kuwo nawuphi na umbala ukuba ngowuphi umbala owufunayo. Oku kunokuba luncedo kakhulu ekwenzeni umzobo ocacileyo ngemibala kwifoto.
I-Opacity kunye noMthunzi sebenza njengoko kuchaziwe apha ngasentla kwi-Watermark yokubhaliweyo.
Nje ukuba ucofe u'Yenzile 'lonke olunye ulawulo lukhona kwaye ucacisiwe apha ngasentla kwi-Text Text Watermark.
I-Vector Watermark isekwe kwisibalo esibonisa umfanekiso. Isibonisi sisebenzisa amanqaku, imigca, ijikaveji kunye nezinye izinto eziphambili kwimizobo. Oku kuthetha ukuba ngokungafani negrafim yomfanekiso omncinci onokujonga ububhetyebhetye ngokobukhulu obahlukeneyo isekheyisi sikhangeleka sigqibelele kuwo wonke ubungakanani.
I-iWatermark + inelayibrari enkulu eyakhelwe-ngaphakathi yeVV yeVS. I-SVG yifomathi ethile yeesave.
Oku ngasentla ngumzekelo wokusebenzisa ngaxeshanye i-SVG vector graphic (impungutye), imethadatha (engabonakaliyo) kunye ne-2 yombhalo weew watermark (Akukho mvula… Fox Photography).
OKUBALULEKILE: Iimpawu ezibonakala ngokufihlakeleyo zihlala zilungile. Kodwa kulo mfanekiso mncinci kwakubalulekile ukusebenzisa iiwatchark eziphakamileyo zokuyenza ibonakale kwiscreen esincinci kule ncwadana. Kwinguqulo enkulu yale foto ukuba i-Fox kunye ne-logo endaweni emhlophe yayiyenye yefoto, efana nokuluhlaza okanye onsundu, iya kudityaniswa nefoto kwaye isabonakala. Isigqibo sokumelwa yi-watermark ngokwahluka okuqinileyo okanye okufihlakeleyo konke kuxhomekeke kwinjongo yakho.
Olunye uhlobo oluluncedo yiBorder Watermark. Ikwasebenzisa i-SVG (inguqulelo egqibeleleyo kuwo onke amasayizi) ubugcisa ukuze uzobe imida ujikeleze umfanekiso wonke kunye nokuprintwa ezimbombeni. Sebenzisa uPhatho obonwe ngezantsi ukukhetha umzobo kwilayibrari yomda. Imida inesicwangciso esikhethekileyo esibizwa ngokuba:
hina ugcina umda kumgama osetelweyo.
Ungasebenzisa imida ukuqaqambisa umntu lowo okhethekileyo. :)
Umzekelo womfanekiso weQR apha ngezantsi ubambe iwebhusayithi yethu i-url, https://plumamazing.com. Ukusetyenziswa kwekhamera kwi-iOS (kwi-iOS) kunye neprogram yekhamera ecocekileyo kwi-Android inokukhangela kwaye isebenze ngolwazi kwiikhowudi ze-QR. Zininzi nezinye ii -apps zeskena se-QR ezifumaneka kwiivenkile zeapp. Skena ikhowudi ye-QR engezantsi kwaye ufumane ukhetho lokuya kwindawo yethu ngokuzenzekelayo. Unokwenza indawo yakho enye okanye kulo naliphi na iphepha elinalo naluphi na ulwazi ofuna ukulubonisa.
Imizekelo yokusebenzisa. Ii-QR's zinokusebenziseka njengewotshi kwiifoto kunye neminye imizobo enokubamba igama, i-imeyile, i-url yokusa abantu kwindawo yakho okanye kolunye ulwazi kuxhomekeke kubuchule bakho.
1. Umntu othile unokuba nee-watermark zeQR zeqela leefoto kwaye i-QR nganye inokukhokelela kwiphepha layo lewebhu ngolwazi lwendawo, iimeko, amaxabiso, njl.
2. Jonga imifanekiso yakho ngeQR equkethe i-url yakho, i-imeyile, ilungelo lokushicilela kunye nolunye ulwazi. Ilungile ekugcineni unxibelelwano lwakho kunye nefoto ye-Facebook, Twitter kunye nezinye iidiya zentlalo. Xa ulayisha ifoto kwiisayithi zosasazo loluntu zihlala zisusa imethadatha. Iisayithi zentlalo azisusi ii-watermark ezibonakalayo ezinje ngesicatshulwa, utyikityo, imizobo okanye ii-QR.
Yenza i-QR-Code Watermark!
Ukusuka kwiphepha 'elitsha leWatermark' khetha 'iKhowudi yeKhowudi ...'. Yinike igama kwaye uhlengahlengise incasa yakho. Gcina ukhumbula ukuba unciphisa ubungakanani kunye nokukhanya kunokuba nzima kwiskena ukuba sifunde lonke ulwazi. Zama kwaye ufunde ngakumbi malunga nee-QR kwiwebhu ngolwazi oluthe kratya.
ICEBISO: Cofa apha ngolwazi oluthe kratya kwiKhowudi ye-QR kunye nokufundeka
Utyikityo (olusuka kwisiLatin: uphawu, "ukusayina") ngumfanekiso obhalwe ngesandla (kwaye uhlala ubhalwe ngesitayile) wegama lomntu elibhalwa ngumntu kumaxwebhu njengobungqina besazisi kunye nenjongo. Utyikityo luphawu lomenzi wemisebenzi. Amagcisa amaninzi awaziwayo (uClaude Monet, Albrecht Durer, uHenri de Toulouse-Lautrec, uSalvador Dalí, uJohannes Vermeer, uWassily Kandinsky, uJoan Miró, uHenri Matisse, uHenri Rousseau, uMaxfield Parrish nabanye abaninzi) batyikitye umsebenzi wabo. Ungavumeli nabani na ukuba akuxelele ngenye indlela, utyikityo lunokwenza i-watermark yakudala.
'Utyikityo lweWatermark' lunokwenziwa 'yiSiginitsha yokuSayina' okanye ngemizobo (ifayile ye-png ebonakalayo) oyifakileyo. Imizobo enomahluko omkhulu njengotyikityo apho inki evela usiba ibamnyama okanye ubuncinci emnyama kwaye imvelaphi yemhlophe isebenza kakuhle.
Yenza i-Watermark yeSiginesha!
Iindlela ezi-3 zokufaka utyikityo lwakho kwaye ulisebenzise njengewermark.
Thatha iphepha lephepha elimhlophe elingaqwenganga, i-inki emnyama ebomvu okanye irinki ubhale utyikityo lwakho embindini. Yenza eli phepha lilinganiswe ngokufanelekileyo ngaphandle kwezithunzi.
Ukusuka kwiphepha elitsha 'leWatermark' nqakraza 'UkuTyikitya kweSayinwa' ukubona eli phepha.
Cofa kwindawo ethi 'Sayina utyikityo', iya kukusa kwikhamera apho ungathatha khona ukuskena / ifoto yotyikityo lwakho. Oku kungathatha iinzame ezimbalwa zokufumana ukuxhoma kwayo.
Skena umahluko - Yiba yinkosi yeJedi uhlengahlengise ukukhanya kunye nobumnyama kwindalo iphela. Esi siseto esibaluleke kakhulu sokuhlengahlengisa ukufumana utyikityo lwakho kunye nokususa izithunzi okanye imibimbi ephepheni. Umhlophe uya kususwa kwaye kuphela ziinki ezimnyama ze-inki eziza kuhlala kwifayile ye-.png eyenzileyo yesiginitsha yakho.
Fumana utyikityo lwakho kwiFoto albhamu. Unokuba neskena esenziwe kwenye iskena okanye ezinye iindlela onokuthi ungenise ngazo kwiFoto yakho yeAlbum kwaye emva koko info iWatermark +.
Cofa indawo ethi 'Zoba' apha ngasentla ukuze ubhale ngesandla kwisiginitsha yakho usebenzisa umnwe wakho. Cinezela kwaye ubambe "iseyile etyikityiweyo" ngeqhezu lomzuzwana, de kube i-canvas ibonise ubume boluhlaza kuyo, emva koko ke qala ukusayina utyikityo lwakho ngomnwe wakho okanye ngepensile ka-Apple.
Zonke ezinye iisetingi zichaziwe 'kwiWatch Watermark' apha ngasentla.
Ngoku ungasayina ngokulula iifoto ze-smartphone kunye neminye imifanekiso yobugcisa ngaphambi kokubeka ukwabelana ngazo kwi-facebook, i-twitter kunye ne-instagram, njl.
Ukubeka utyikityo olufihlayo kwifoto yenye yeendlela ezilungileyo zokulumkisa ababukeli bexesha elizayo ukuba uyidalile kwaye ngaloo ndlela kugcinwe unxibelelwano kwifoto yakho ngakumbi ukuba iya kuba ntsholongwane.
OKUBALULEKILEYO: Umda we-1 metadata watemark kwifoto.
Kukho okungaphezulu kokuhlangana neliso ngaphakathi kwifayile yemifanekiso yefoto yedijithali. Iifayile zeefoto azikwazi ukugcina kuphela idatha yedatha kodwa kunye nolwazi malunga nemifanekiso kwaye ibizwa ngokuba yi 'Metadata'. Iifayile zeefoto zinokubandakanya ubuchwephesha, inkcazo kunye neeklasi zolawulo lweemethadatha zeentlobo ezininzi ezinamagama afana ne-EXIF, TIFF, IPTC, njl. Into ebalulekileyo kukuba iWatermark + ixhasa imethadatha njengoluhlobo lwe-watermark. Oku kuthetha ukuba unokwenza i-watermark eyongeza igama lakho, isihloko, ilungelo lokushicilela, njl.njl ngaphakathi kwifayile yefoto njengemethadatha. Olunye uluhlu lokhuselo kunye nendlela yokuqinisekisa ukuba ifoto yeyakho.
Kwi-iWatermark unokwenza izinto ezi-3 ezibalulekileyo ngemethadatha:
1. Yongeza imethadatha engabonakaliyo kwifoto kunye ne-watermark.
2. Yongeza i-watermark ebonakalayo ebonisa ukhetho lwakho lweethadatha ebekwe kwifoto.
3. Jonga imethadatha yefoto.
Yenza iMetadata Watermark!
1. Ukongeza i-watermark yemethadatha engabonakaliyo ukuqala kwiphepha le-'New Watermark 'khetha' iMetadata ... 'kwaye uza kubona eli phepha:
Apha ungongeza umyili weefoto kwaye ungumnini welungelo lokushicilela. Faka amagama aphambili ukunceda ukufumana ifoto kwixesha elizayo ukuba usebenzisa iGumbi lokukhanya okanye iPicasa. Indawo yemibono yayo nayiphi na into onqwenela ukuyongeza.
OKUBALULEKILE: Kuphela yi-1 StegoMark evunyelweyo ngefoto nganye.
I-StegoMark luphawu lokuqala lokuphunyezwa kwewatch ye-steganographic yokufota kwaye ifumaneka kwi-iWatermark kuphela. I-Steganography ibhekisa kuyo nayiphi na inkqubo yokungenisa idatha ethile ngokungabonakali kwidatha yomfanekiso wesithombe.
I-StegoMark kuba idibanisa iSteganogra, edla ngokubizwa Stego ngamafutshane kwaye uphawu ukusuka kwigama elithi Watermark. I-StegoMark isebenzisa i-algorithm ekhethekileyo eyilwe kwiPlum emangalisayo. Le encoding ekhethekileyo yenza ukuba idata iphantse ayinakwenzeka ukuba iqonde ngaphandle kwe-iWatermark. Ukuba akukho gama lokugqitha kwaye nayiphi na ikopi yeWatermark inokuveza isicatshulwa esifihliweyo. Ukuba kukho ipasigama, ngumntu kuphela onegama eligqithisiweyo kunye neWatermark enokuveza isicatshulwa esifihliweyo.
Enye indlela yokusebenzisa iStegoMark kukufaka i-imeyile okanye url yeshishini kwifoto. Oku kunye neMetadata kunye nekhabhathi ebonakalayo inika uluhlu olwahlukileyo lokhuselo lweziqinisekiso zakho ngaphakathi kwaye ziqhotyoshelwe kwifoto. Umaleko ngamnye we-watermark uya kumelana ngeendlela ezahlukeneyo ezinokuthi zenziwe kwifoto njengokutsala, ukuphinda uphinde, unike igama ngokutsha, njl njl ukugcina ulwazi lobunini bakho.
Ukuqala uye kwiphepha elitsha 'leWatermark' kwaye ukhethe 'i-StegoMark ...' kwaye uza kubona eli phepha:
'Igama' beka igama elichazayo elifanelekileyo le StegoMark
'Kumyalezo ofihliweyo' beka isicatshulwa ofuna ukusifaka kwidatha yomfanekiso.
Usebenzisa igama eligqithisiweyo akukho mntu une-iWatermark + unokufunda umyalezo kodwa akukho wumbi.
Ngenisa igama eligqithisiweyo labucala ngakumbi elithetha ukuba kuphela umntu onegama eligqithisiweyo kunye ne-iWatermark + enokufunda umyalezo.
Ukufunda iStegoMark kuqala uvule ifoto ye-StegoMark ekhutshiweyo ethunyelweyo kwiqhosha elithi 'Vula ifoto' kwiWatermark +.
Emva koko yiya kwi i kunye nesangqa esijikeleze i icon kuyo kwi-bar bar.
Cofa kuloo nto ukuze ubone ulwazi olukule foto, cofa indawo ethi 'StegoMark' njengoko kubonisiwe apha ngezantsi. Faka iphasiwedi ukuba unayo kwaye ucofe iqhosha lokufumana ukubona umyalezo ofihliweyo uvela ebhokisini ekunene.
OKUBALULEKILEYO: Kuku-1 StegoMark kwifoto nganye.
Iimpawu ezingama-25 okanye ngaphantsi (kunconyiwe) kwiStegoMark ivumela ukuba inyame ngakumbi xa iphinda iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ihlawulwe. Ukuya kuthi ga kwi-80 kunokusetyenziswa kodwa kuya kuchaphazela ukuqina komyalezo. Khumbula ukuba ungasebenzisa isifinyezo se-URL ukwenza i-URL ibe yincinci yokungenisa.
Ukuze ufunde iStegoMark Cofa Apha
OKUBALULEKILEYO: Xa ubungakanani bewatsermark busebenza, "isishwankathelo sedreyini" ejikeleze ifoto siboniswe ngombala oluhlaza (hayi okwesibhakabhaka njengesiqhelo) ukukukhumbuza ukuba ubungakanani bayo busasebenza. Kwakhona yi-1 kuphela yokwenza ubungakanani kwakhona bewatch evunyelwe ngexesha. Ukuba ukhetha entsha endala icinyiwe.
Sijonga ukukhulisa i-watermark kuba yonke into oyenzayo ukuguqula ifoto iyenza ibe yeyakho. Ukhetho lwakho lobugcisa lisa iifoto kwisazisi sakho. Iifoto ze-Instagram ayizizo zokuqala ukuba zizikwere kodwa i-Instagram iye, ngokufanelekileyo, yenza iifoto zesikwere kunye neevidiyo isitayile sabo. Kunokuba, kwixa elizayo, ukuba abanye ubungakanani kunye neemilo ziya kwenziwa zaziwe ngamanye amagcisa.
Phinda wenze ubungakanani kwakhona njenge-watermark evumela i-Instagrammers ukuba ijonge ngokukhawuleza kwaye ikhuphe ubungakanani 'be-Instagram' kwi-Instagram nakwezinye iinethiwekhi zentlalo. Kungenxa yoko le nto uninzi luva ukuba iWatermark + sisixhobo esifanelekileyo se-Instagram.
Apha ngezantsi kukho ifoto eguqulwe kungcakazo lwekhusi, kunye nescreen ngasinye esibonisa useto lokubuyisela ubungakanani belo foto.
Imifanekiso yoqobo ayikenziwa
Sidibanise i-Aspect Fit kunye ne-Aspect Gcwalisa izinto zangaphambili ezahlukileyo kwi-interface kwinto enye ebizwa ngokuba yi-zoom. Lonke ulawulo ngoku kubandakanya ukusondeza likuvumela ukuba usebenzise imbonakalo yangaphambili ukuze ufumane 'ukuziva' malunga nento ofuna ukuyibona ukuze ikhuphe.
Qaphela xa utsala ukuba ulawulo lwe-Zoom lutshixe kwaye lubonise i-Aspect Fit kwi-0% Zoom kunye ne-Aspect Gcwalisa kwi-100% Zoom. Oku kwenzelwe ukwenza lula.
Enye indlela yokwenza i-watermark kukunika ifoto yonke isitayile. Amacebo okucoca ulwenziwo akhokelela KWIINDAWO zokucoca ulwelo ezininzi. Ngelishwa asinakubachaza bonke apha. Sincoma ukuzama (ukudlala ujikeleze) ngesihluzi esinye njenge 'Pixelate' ukufumana iimvakalelo zendlela abasebenza ngayo. Nje ukuba ucofe useto oluthile oluthandayo ulugcine njengewotshi enegama elichazayo ukuze ufumane kwaye ulisebenzise kwixesha elizayo. Unokuba negama lokucoca ulwelo lwabazobi abazikhuthazayo. Icebo lokucoca ulwelo 'likaVan Gogh' linokwenza imibala ibe namandla kwaye yongeze ukujikeleza. Icebo lokucoca i'Ansel Adams 'lingenza ifoto ibe mnyama kwaye imhlophe, yonyuse umahluko kwaye yongeze ubukhali. Amagama afanelekileyo anokukunceda ubuyele kwindibaniselwano yezicwangciso ozifumanayo kwaye uzigcine.
Iifilitha eWatermark zisekwe kwi-Core Image itekhnoloji eyenziwe ngu-Apple. Olu nxibelelaniso luneengcaciso zombini ezobuchwephesha, iinkcukacha zeseto kunye neefoto ezibonisa utshintsho abanokuluvelisa. Cofa apha ukuze ufumane ireferensi eqinisekileyo.
Le watermark yongezwa xa ufuna ukutshintsha ifomathi kwimithombo yeendaba yokufaka. Umzekelo igalelo lefoto likwifomathi yeheic kwaye ufuna ukuba ikhuphe kwi-
Uninzi lwabantu. Ngaphandle kokukhetha 'ukuThumela ngaphandle' i-watermark iWatermark + ibisoloko ithunyelwa ngaphandle kwifomathi yefayile yokufaka ukuya kwimveliso ifomathi efanayo ngokuzenzekelayo. Ifomathi yokufaka ichaze ifomathi yemveliso. Ngoku, ngale watermark unokutshintsha ifomathi yokuvelisa kwiifom ezahlukeneyo.
Nantsi indlela ebonakala ngayo:
Ukusebenzisa, kuqala unike igama ngaphandle koko uza kubona uphawu lwesilumkiso esimthubi njengakwisikrini esingentla. Unokunika igama elichazayo elifana 'nokuThumela ifoto ngaphandle kwePNG okanye ividiyo kwiMP4'. Ukuba uza kuyisebenzisa kwiifoto khetha ifomathi yefayile ekhutshelweyo oyifunayo. Cofa phambili ukuya ngasemva kwiintolo ecaleni 'kweFomathi yeFayile yeFayile' apha ngasentla. Ngoku xa ufuna ifomathi yemveliso ukuba ibe .png khetha le watermark ukongeza kwezinye ofuna ukuzisebenzisa.
Ezinye iindlela zezi:
Susa iMetadata yeNdawo yeGPS-akukho datha yeGPS iya kuba kwisithombe esine-watermark
Susa ZONKE i-Metadata-isusa yonke i-EXIF, i-IPTC, i-GPS kunye neminye imethadatha.
Gcina uMhla oGuquliweyo- xa ugcina umhla ofanayo oguqulweyo njengakwifoto yoqobo. Xa ucima utshintsha umhla oguqulweyo ube ngumhla wangoku.
Gcina uMhla woKwenziwa- xa ugcina umhla ofanayo njengakwifoto yoqobo. Xa ucima utshintsha umhla owenziweyo ube ngumhla wangoku.
Useto kwisikrini esingentla yindlela eqhelekileyo abantu ababeke ngayo.
Ukuthumela ngaphandle iinketho zefomathi:
Iifoto-Ukungagqibeki (koqobo) *, HEIC, JPEG, PNG, kunye neGIF.
Ividiyo-engagqibekanga (yoqobo) *, MOV, M4V kunye neMP4.
Ukungagqibeki (koqobo) kuthetha ukungagqibeki kokuthumela ngaphandle kuyo nayiphi na ifomathi yokufaka. Le yindlela iWatermark + esebenze ngayo ukusukela oko yadalwa. Awudingi ukusebenzisa 'uKhetho lokuThumela ngaphandle' konke konke ukuze ube nefoto enamanzi enefomathi efanayo nefoto yoqobo.
Okokuqala, ukukhetha ibhetshi yeefoto ezi-2 okanye ngaphezulu, cofa iqhosha 'Skhetha Iifoto (ngolwazi)' ngezantsi kwaye ukhethe iifoto zakho.
Ukuba kufuneka, Cofa apha ukufunda malunga nokungenisa indawo yemidiya kwincwadana. Okulandelayo khetha ii-watermark ofuna ukuzisebenzisa emva koko uqalise ukuthumela ngaphandle ngokucofa i icon ethi 'Yabelana' kwi-nav bar ezantsi ekunene. Thepha 'Gcina uMfanekiso' ozibeka zonke iifoto eziphawulweyo kwi-albhamu yeefoto zekhamera ye-Apple. Ukusetyenzwa kweBatch akunakwenziwa ngokuthumela ngaphandle ngokuthe ngqo kumajelo asekuhlaleni afana noFacebook, Twitter, njl. Emva kokuba ifoto yokuqala igqityiwe ukufumana iwatermark uya kufumana le ncoko yababini (ngezantsi).
ICEBISO: Sebenzisa 'Khetha iiFoto (ngolwazi)' ukukhetha imifanekiso emininzi: ucofe umfanekiso uze uye kwifoto yokugqibela uze ucofe kabini ukukhetha zonke iifoto ezisuka kwimpompo yokuqala.
Ukukhetha "Inkqubo yeQela lonke" kuvumela iWatermark + ukuba ithathe indawo, ibukele, kwaye ikhuphe zonke iifoto ngaphandle kongenelelo lomsebenzisi.
OKUBALULEKILEYO: Ngenxa yokunqongophala kwe-Apple API, ukuqhubekeka kwebhetshi, ngaphandle kongenelelo, kunokwenzeka kuphela kwi-Apple's Camera Roll. Ukuthumela iifoto ezininzi kwi-Facebook, kwi-Twitter, kwiDropbox, njl.nokwenziwa kuphela ngokulandelelana, nganye nganye.
I-iWatermark + isebenza kwiifoto ze-Apple njengolwandiso lokuhlela.
Ukusetyenziswa kwiifoto ze-Apple
Vula iApple Photo app kwifoto.
Ekunene phezulu kwimpompo yefoto, 'Hlela' (umfanekiso wekhusi ongezantsi).
Kwiphepha elilandelayo kukho i icon yamachaphaza ama-3 phezulu ekunene. Thepha (umfanekiso wekhusi ngezantsi).
Iphepha liyatyibilika kwaye lijongeka ngolu hlobo. Cofa kwi-iWatermark +. Ukuba awuyiboni cofa kwi-More into kwaye ufumane iWatermark okanye ezinye ii-apps ezihlela iifoto apho.